ShweMinThar: June 2020
ခြဥျးကပျလှယျသူ ဖွဈဖို့ (Be approachable)
ကုမ်ပဏီတဈခုကနေ ကြှနျတေျာ့ကို အှနျလိုငျးဟောပွောပှဲလေး လုပျဖို့ ကမျးလှမျးပါတယျ။ အဖိတျခံရသူတှပေဲ တကျရမဲ့ပှဲမို့ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ အှနျလိုငျးမှာ ကွညောပေးစရာ မလိုပါဘူး။ အဲ့လိုနဲ့ လုပျမဲ့ရကျ မတိုငျခငျ ညမှာတော့ စီစဉျတဲ့ အဈမက အရေးတကွီး ဖုနျးဆကျလာတယျ။
ဆရာ၊ မနကျဖွနျမနကျကြ စိတျဝငျစားသူ ဘယျသူမဆို တကျလို့ရကွောငျး ပို့ဈလေး တငျပေးပါလားတဲ့။ အဈမ ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ သကျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးဆီ အကွောငျးကွားတဲ့ နရောမှာ အခကျအခဲ ဖွဈသှားလို့၊ လူနညျးမှာ စိုးလို့ပါတဲ့။ အဲဒါနဲ့ အဈမတို့က ဒီအဖှဲ့အစညျးက လူတှကေိုပဲ ရညျရှယျတာဆို သူတို့အတှကျပဲ လုပျပေးလေ၊ တကယျလို့ အဆငျမပွရေငျ ရကျရှလေို့ကျလညျး ရတာပဲ ဆိုတော့ ဆရာ့ကို ပွောရမှာ အားနာလို့တဲ့။ သွျော အဈမရယျ၊ ကြှနျတျောလညျး ဘာမှ ပငျပနျးတာမှ မဟုတျတာကို၊ အဈမတို့ သခြောစာပွနျတငျပွီးသာ လုပျလိုကျနျော ဆိုတော့ သူ့မှာ ကြေးဇူးတှေ တငျလို့။
တကယျလညျး ဟုတျတယျ။ ကြှနျတေျာ့အတှကျက စငျပျေါမှာ တခမျးတနားတှေ ဝတျပွီး ပွောရတာလညျး မဟုတျ။ အိမျကနပေဲ ပွောရတာ။ ပွီးတော့ ညဘကျ။ သူတို့ပှဲကို လကျခံထားလို့ တခွားပှဲတဈခုခု ငွငျးထားခဲ့ရတာလညျး မဟုတျ။ ဒီရကျကလေး ရှလေို့ကျရတာ ကြှနျတေျာ့အတှကျ ဘာမှ အပနျးမကွီးတဲ့ကိစ်စ။ အဲဒါကိုမှ ကြှနျတျောက မာနတဈခှဲသားနဲ့ မရဘူး၊ ဒီရကျဆို ဒီရကျပဲလို့ လုပျလိုကျရငျ သူ့မှာ ဘယျလောကျ အဆငျမပွေ ဖွဈသှားမလဲ။
ကိုယျတိုငျလညျး အဲ့လိုပှဲတှေ စီစဉျဖူးတဲ့အခါမှာ ကောငျးကောငျး ကိုယျခငျြးစာတယျ။ တခြို့ကိုဆို ဖုနျးဆကျရဖို့တောငျ တှနျ့ဆုတျနမေိတဲ့အထိ။ အချေါအဝျေါမြား လှဲသှားမလား၊ အလုပျမြားနတေဲ့အခြိနျ ဖုနျးဆကျရကောငျးလား ဆိုပွီးမြား ဖွဈသှားမလား စသဖွငျ့ သေးသေးကလေးတှကေအစ စိတျပူနရေတယျ။ သူတို့နဲ့ ပတျသကျရတာ ဘယျတော့ ပေါကျကှဲမယျ မသိတဲ့ မိုငျးဗုံးတဈလုံးကို ရှကျထားရသလိုပဲ။
အဲ့လိုလူတှနေဲ့ တှဲအလုပျလုပျရရငျ ကိုယျ့ရဲ့ တီထှငျဖနျတီးနိုငျစှမျးတှေ ကကြုနျတယျ။ ဘာကိုမှ ကိုယျ့ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ကိုယျ မလုပျရဲတော့ဘူး။ Initiative မဖွဈတော့ဘူး။ တခုခုဆို မှားသှားမှာ သိပျကွောကျတာကိုး။ လူက ပရိုဂရမျ သှငျးထားတဲ့ စကျရုပျလို ဖွဈလာတယျ။ အဲဒါမြိုးက လုပျဖျောကိုငျဖကျတှထေဲမှာလညျး ရှိတတျသလို၊ မိသားစုမှာလညျး ရှိနိုငျတယျ။ သူငယျခငျြးလညျး ဖွဈနိုငျသလို၊ ကိုယျ့ရညျးစား၊ ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျလညျး ဖွဈနိုငျတယျ။
ပွောငျးပွနျအနနေဲ့ သိပျသဘောကောငျးတဲ့သူ၊ နားလညျမှု ပေးတဲ့သူ၊ အပွဈတငျဖို့ထကျ ဘယျလိုကောငျးအောငျ လုပျပေးရမလဲ ဆိုတဲ့ဘကျကနေ ကွညျ့တတျတဲ့သူတှနေဲ့ တှဲလုပျရပွနျတော့လညျး ကိုယျ့မှာ ပြျောနရေော။ အဲ့လိုလူတှနေဲ့ တှရေ့တိုငျး ငါလညျး သူတို့လို ဖွဈအောငျ ကွိုးစားမယျ ဆိုတဲ့စိတျ အမွဲဝငျတယျ။ ဒါမှ သူတို့နဲ့ ကိုယျတှဲလုပျတုနျးက ပြျောရသလို၊ ကိုယျနဲ့ အလုပျတှဲလုပျရသူတိုငျးမှာလညျး စိတျခမျြးသာရမှာ ဆိုပွီးတော့ပေါ့။
တဈဖကျကလညျး သဘောကောငျးတယျဆိုပွီး အလေးမထားတာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။ သူမြား ကိုယျ့ကို အလေးထားတာ၊ မထားတာ နောကျ။ ကိုယျတိုငျကတော့ အဲ့လိုလူတှကေို ပိုပွီး အလေးထားကွောငျး ပွသလရှေိ့တယျ။ ကြေးဇူးတငျလို့။ အသိအမှတျပွုလို့။ ကွောကျလို့ လုပျယူထားတဲ့ လေးစားမှု မဟုတျဘဲ တကယျ ရငျထဲက လာတဲ့ လေးစားမှု ဖွဈတော့ ပိုပွီးလညျး အသကျဝငျပါတယျ။
ပွောရရငျ Approachable ဖွဈဖို့ပေါ့။ မွနျမာလိုဆိုရငျ ခဉျြးကပျလှယျသူလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
ကိုယျ ငယျငယျက စာမေးပှဲ အမှတျနညျးတာ၊ ရနျဖွဈလာတာ၊ မိဘချေါခံရတာ စသဖွငျ့ တခုခု အမှားလုပျမိတဲ့အခါ အဖနေဲ့ အမမှော ဘယျသူ့ကို အရငျပွောရဲသလဲ။
ကိုယျ့ရောဂါအကွောငျး ဆရာဝနျကွီးကို မမေးရဲလို့ ရပျကှကျထဲက အထှထှေရေောဂါကု ဆရာဝနျကလေးကို ဆေးစဈခကျြတဈထပျကွီးနဲ့ အားကိုးတကွီး သှားမေးတာ ဘာကွောငျ့လဲ။
ကိုယျမသိတဲ့ ရုံးဌာနတဈခုကို သှားတဲ့အခါ သဘောကောငျးပုံရတဲ့ သူတှကေိုပဲ မေးတာမို့လား။ အဲ့လိုလေး ကိုယျမသိတာကို တလေးတစား ယဉျယဉျကြေးကြေးနဲ့ ပွနျဖွပေေးလိုကျရငျ ဘယျလိုခံစားခဲ့ရလဲ ပွနျစဉျးစားကွညျ့။
ဒါဆို Approachable ဖွဈခွငျးကို သခြောသဘောပေါကျသှားလိမျ့မယျ။
ကိုယျနဲ့ တှဲဖကျအလုပျလုပျသူတှရေဲ့ စိတျထဲမှာ ဒီလူက တျောတယျ၊ ဒီလူက အခြိနျတိကတြယျ၊ ဒီလူက ပရိုဆနျတယျ စသဖွငျ့ ပုံရိပျတှေ ရှိကွပါတယျ။ အဲဒီထဲမှာ ကြှနျတျော သဘောအကမြိဆုံး၊ ကိုယျလညျး အဖွဈခငျြဆုံး ပုံရိပျကတော့ ဒီလူက ခဉျြးကပျလှယျတယျ ဆိုတာပဲ။ တခုခုဆို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး မေးရဲတယျ။ သူတို့အခကျအခဲကို လာပွောရဲတယျ။ အပွဈတငျမှာ မဟုတျဘူး၊ ကွောကျနစေရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ ခံစားခကျြကို ကြှနျတျောနဲ့ ပတျသကျဆကျစပျသူတိုငျးဆီမှာ ရနစေခေငျြတယျ။ (အထူးသဖွငျ့ အငယျတှမှော)
စိတျကောငျးရှိလှနျးလို့တော့ မဟုတျဘူး။ အဲ့လို Approachable ဖွဈသူတှနေဲ့ အလုပျလုပျဖူးလို့၊ သူတို့ကွောငျ့ စိတျလကျပေါ့ပါးဖူးလို့ ကိုယျရခဲ့တဲ့ ခံစားခကျြကို သူတဈပါးဆီ လကျဆငျ့ပွနျကမျးပေးတဲ့ သဘောပဲ။
ကြှနျတျော တဈခါရေးဖူးသလိုပါပဲ။ ပရဟိတလုပျဖို့၊ အမြားအကြိုး ထမျးရှကျဖို့တို့ ခဏထား။ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြ အဝနျးအဝိုငျးက လူတှကေိုတောငျ ဘယျလောကျ စိတျခမျြးသာအောငျ ထားပွီးပွီလဲ အရငျစဉျးစားဦး။ ကိုယျ့မိဘ၊ ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျ၊ ကိုယျ့သားသမီး၊ ကိုယျ့ဝနျထမျး၊ ကိုယျ့လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ ကိုယျ့ကွောငျ့ ပြျောနလေား၊ အဆငျပွနေလေား။ ကိုယျ ရောကျလာပွီ ဆိုတာနဲ့ကို သူတို့စိတျမှာ လေးပငျကုနျသလား။ ကိုယျဟာ သူတို့အတှကျ အခြိနျမရှေး ပေါကျကှဲနိုငျတဲ့ မိုငျးဗုံးတဈလုံးလို ဖွဈနလေား။ သခြောစဉျးစားကွညျ့ပါ။
ဖွဈနတေယျဆို အထအန ကောကျတာလေးတှေ လြှော့ကွညျ့။ တဈဖကျသားဘကျကနေ တှေးပေးတတျအောငျ ကွိုးစားကွညျ့။ အပွဈတငျစကား ပွောဖို့ထကျ ပွဿနာ ဖွရှေငျးဖို့ကို ဦးစားပေး စဉျးစားကွညျ့။
မိုငျးတဈလုံး ကှဲသှားရငျ ဘေးက လူတှေ ထိခိုကျတာက နောကျမှ။ အရငျဆုံး ကိုယျက ပေါကျကှဲပဈလိုကျရတာ။ အဲ့လိုသာ ကိုယျ့စိတျကလေးတှကေို ပွငျမယျဆို ကိုယျလညျး ပြျောရလိမျ့မယျ။ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြက လူတှေ ကိုယျ့ကွောငျ့ စိတျခမျြးသာ ပြျောရှငျရရငျ ကိုယျလညျး တူသော အကြိုးပေးလိမျ့မယျ။
တကယျပါ။ တဈနေ့ တဈနေ့ ကွုံတှရေ့သမြှ လူတှကေို ဘယျလိုလေး အဆငျပွအေောငျ လုပျပေးလိုကျရမလဲ ဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ ရှငျသနျရတာ သိပျတနျဖိုးရှိပါတယျ။ လူဖွဈရကြိုးလညျး နပျပါတယျ။ တကူးတက လုပျနစေရာ မလိုတဲ့ ပရဟိတလညျး ဖွဈပါတယျ။
ချဉ်းကပ်လွယ်သူ ဖြစ်ဖို့ (Be approachable)
ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေ ကျွန်တော့်ကို အွန်လိုင်းဟောပြောပွဲလေး လုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းပါတယ်။ အဖိတ်ခံရသူတွေပဲ တက်ရမဲ့ပွဲမို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ကြေညာပေးစရာ မလိုပါဘူး။ အဲ့လိုနဲ့ လုပ်မဲ့ရက် မတိုင်ခင် ညမှာတော့ စီစဉ်တဲ့ အစ်မက အရေးတကြီး ဖုန်းဆက်လာတယ်။
ဆရာ၊ မနက်ဖြန်မနက်ကျ စိတ်ဝင်စားသူ ဘယ်သူမဆို တက်လို့ရကြောင်း ပို့စ်လေး တင်ပေးပါလားတဲ့။ အစ်မ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းဆီ အကြောင်းကြားတဲ့ နေရာမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်သွားလို့၊ လူနည်းမှာ စိုးလို့ပါတဲ့။ အဲဒါနဲ့ အစ်မတို့က ဒီအဖွဲ့အစည်းက လူတွေကိုပဲ ရည်ရွယ်တာဆို သူတို့အတွက်ပဲ လုပ်ပေးလေ၊ တကယ်လို့ အဆင်မပြေရင် ရက်ရွှေ့လိုက်လည်း ရတာပဲ ဆိုတော့ ဆရာ့ကို ပြောရမှာ အားနာလို့တဲ့။ သြော် အစ်မရယ်၊ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှ ပင်ပန်းတာမှ မဟုတ်တာကို၊ အစ်မတို့ သေချာစာပြန်တင်ပြီးသာ လုပ်လိုက်နော် ဆိုတော့ သူ့မှာ ကျေးဇူးတွေ တင်လို့။
တကယ်လည်း ဟုတ်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်က စင်ပေါ်မှာ တခမ်းတနားတွေ ဝတ်ပြီး ပြောရတာလည်း မဟုတ်။ အိမ်ကနေပဲ ပြောရတာ။ ပြီးတော့ ညဘက်။ သူတို့ပွဲကို လက်ခံထားလို့ တခြားပွဲတစ်ခုခု ငြင်းထားခဲ့ရတာလည်း မဟုတ်။ ဒီရက်ကလေး ရွှေ့လိုက်ရတာ ကျွန်တော့်အတွက် ဘာမှ အပန်းမကြီးတဲ့ကိစ္စ။ အဲဒါကိုမှ ကျွန်တော်က မာနတစ်ခွဲသားနဲ့ မရဘူး၊ ဒီရက်ဆို ဒီရက်ပဲလို့ လုပ်လိုက်ရင် သူ့မှာ ဘယ်လောက် အဆင်မပြေ ဖြစ်သွားမလဲ။
ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့လိုပွဲတွေ စီစဉ်ဖူးတဲ့အခါမှာ ကောင်းကောင်း ကိုယ်ချင်းစာတယ်။ တချို့ကိုဆို ဖုန်းဆက်ရဖို့တောင် တွန့်ဆုတ်နေမိတဲ့အထိ။ အခေါ်အဝေါ်များ လွဲသွားမလား၊ အလုပ်များနေတဲ့အချိန် ဖုန်းဆက်ရကောင်းလား ဆိုပြီးများ ဖြစ်သွားမလား စသဖြင့် သေးသေးကလေးတွေကအစ စိတ်ပူနေရတယ်။ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ရတာ ဘယ်တော့ ပေါက်ကွဲမယ် မသိတဲ့ မိုင်းဗုံးတစ်လုံးကို ရွက်ထားရသလိုပဲ။
အဲ့လိုလူတွေနဲ့ တွဲအလုပ်လုပ်ရရင် ကိုယ့်ရဲ့ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေ ကျကုန်တယ်။ ဘာကိုမှ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ် မလုပ်ရဲတော့ဘူး။ Initiative မဖြစ်တော့ဘူး။ တခုခုဆို မှားသွားမှာ သိပ်ကြောက်တာကိုး။ လူက ပရိုဂရမ် သွင်းထားတဲ့ စက်ရုပ်လို ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါမျိုးက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေထဲမှာလည်း ရှိတတ်သလို၊ မိသားစုမှာလည်း ရှိနိုင်တယ်။ သူငယ်ချင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သလို၊ ကိုယ့်ရည်းစား၊ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ပြောင်းပြန်အနေနဲ့ သိပ်သဘောကောင်းတဲ့သူ၊ နားလည်မှု ပေးတဲ့သူ၊ အပြစ်တင်ဖို့ထက် ဘယ်လိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးရမလဲ ဆိုတဲ့ဘက်ကနေ ကြည့်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့ တွဲလုပ်ရပြန်တော့လည်း ကိုယ့်မှာ ပျော်နေရော။ အဲ့လိုလူတွေနဲ့ တွေ့ရတိုင်း ငါလည်း သူတို့လို ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ် ဆိုတဲ့စိတ် အမြဲဝင်တယ်။ ဒါမှ သူတို့နဲ့ ကိုယ်တွဲလုပ်တုန်းက ပျော်ရသလို၊ ကိုယ်နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ရသူတိုင်းမှာလည်း စိတ်ချမ်းသာရမှာ ဆိုပြီးတော့ပေါ့။
တစ်ဖက်ကလည်း သဘောကောင်းတယ်ဆိုပြီး အလေးမထားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သူများ ကိုယ့်ကို အလေးထားတာ၊ မထားတာ နောက်။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ အဲ့လိုလူတွေကို ပိုပြီး အလေးထားကြောင်း ပြသလေ့ရှိတယ်။ ကျေးဇူးတင်လို့။ အသိအမှတ်ပြုလို့။ ကြောက်လို့ လုပ်ယူထားတဲ့ လေးစားမှု မဟုတ်ဘဲ တကယ် ရင်ထဲက လာတဲ့ လေးစားမှု ဖြစ်တော့ ပိုပြီးလည်း အသက်ဝင်ပါတယ်။
ပြောရရင် Approachable ဖြစ်ဖို့ပေါ့။ မြန်မာလိုဆိုရင် ချဉ်းကပ်လွယ်သူလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ် ငယ်ငယ်က စာမေးပွဲ အမှတ်နည်းတာ၊ ရန်ဖြစ်လာတာ၊ မိဘခေါ်ခံရတာ စသဖြင့် တခုခု အမှားလုပ်မိတဲ့အခါ အဖေနဲ့ အမေမှာ ဘယ်သူ့ကို အရင်ပြောရဲသလဲ။
ကိုယ့်ရောဂါအကြောင်း ဆရာဝန်ကြီးကို မမေးရဲလို့ ရပ်ကွက်ထဲက အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်ကလေးကို ဆေးစစ်ချက်တစ်ထပ်ကြီးနဲ့ အားကိုးတကြီး သွားမေးတာ ဘာကြောင့်လဲ။
ကိုယ်မသိတဲ့ ရုံးဌာနတစ်ခုကို သွားတဲ့အခါ သဘောကောင်းပုံရတဲ့ သူတွေကိုပဲ မေးတာမို့လား။ အဲ့လိုလေး ကိုယ်မသိတာကို တလေးတစား ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ ပြန်ဖြေပေးလိုက်ရင် ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲ ပြန်စဉ်းစားကြည့်။
ဒါဆို Approachable ဖြစ်ခြင်းကို သေချာသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်။
ကိုယ်နဲ့ တွဲဖက်အလုပ်လုပ်သူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဒီလူက တော်တယ်၊ ဒီလူက အချိန်တိကျတယ်၊ ဒီလူက ပရိုဆန်တယ် စသဖြင့် ပုံရိပ်တွေ ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော် သဘောအကျမိဆုံး၊ ကိုယ်လည်း အဖြစ်ချင်ဆုံး ပုံရိပ်ကတော့ ဒီလူက ချဉ်းကပ်လွယ်တယ် ဆိုတာပဲ။ တခုခုဆို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးရဲတယ်။ သူတို့အခက်အခဲကို လာပြောရဲတယ်။ အပြစ်တင်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ကြောက်နေစရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ကျွန်တော်နဲ့ ပတ်သက်ဆက်စပ်သူတိုင်းဆီမှာ ရနေစေချင်တယ်။ (အထူးသဖြင့် အငယ်တွေမှာ)
စိတ်ကောင်းရှိလွန်းလို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့လို Approachable ဖြစ်သူတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ဖူးလို့၊ သူတို့ကြောင့် စိတ်လက်ပေါ့ပါးဖူးလို့ ကိုယ်ရခဲ့တဲ့ ခံစားချက်ကို သူတစ်ပါးဆီ လက်ဆင့်ပြန်ကမ်းပေးတဲ့ သဘောပဲ။
ကျွန်တော် တစ်ခါရေးဖူးသလိုပါပဲ။ ပရဟိတလုပ်ဖို့၊ အများအကျိုး ထမ်းရွက်ဖို့တို့ ခဏထား။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် အဝန်းအဝိုင်းက လူတွေကိုတောင် ဘယ်လောက် စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားပြီးပြီလဲ အရင်စဉ်းစားဦး။ ကိုယ့်မိဘ၊ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်၊ ကိုယ့်သားသမီး၊ ကိုယ့်ဝန်ထမ်း၊ ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ကိုယ့်ကြောင့် ပျော်နေလား၊ အဆင်ပြေနေလား။ ကိုယ် ရောက်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ကို သူတို့စိတ်မှာ လေးပင်ကုန်သလား။ ကိုယ်ဟာ သူတို့အတွက် အချိန်မရွေး ပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့ မိုင်းဗုံးတစ်လုံးလို ဖြစ်နေလား။ သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ။
ဖြစ်နေတယ်ဆို အထအန ကောက်တာလေးတွေ လျှော့ကြည့်။ တစ်ဖက်သားဘက်ကနေ တွေးပေးတတ်အောင် ကြိုးစားကြည့်။ အပြစ်တင်စကား ပြောဖို့ထက် ပြဿနာ ဖြေရှင်းဖို့ကို ဦးစားပေး စဉ်းစားကြည့်။
မိုင်းတစ်လုံး ကွဲသွားရင် ဘေးက လူတွေ ထိခိုက်တာက နောက်မှ။ အရင်ဆုံး ကိုယ်က ပေါက်ကွဲပစ်လိုက်ရတာ။ အဲ့လိုသာ ကိုယ့်စိတ်ကလေးတွေကို ပြင်မယ်ဆို ကိုယ်လည်း ပျော်ရလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ ကိုယ့်ကြောင့် စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ရရင် ကိုယ်လည်း တူသော အကျိုးပေးလိမ့်မယ်။
တကယ်ပါ။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ကြုံတွေ့ရသမျှ လူတွေကို ဘယ်လိုလေး အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးလိုက်ရမလဲ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ရှင်သန်ရတာ သိပ်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ လူဖြစ်ရကျိုးလည်း နပ်ပါတယ်။ တကူးတက လုပ်နေစရာ မလိုတဲ့ ပရဟိတလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 1:55 PM No comments:
Labels: Opinion, အလုပ်​အကိုင်​
လယျယာမွကေို အရပျစာခြုပျနဲ့ အရောငျးအဝယျ လုပျ
လယျယာမွကေို အရပျစာခြုပျနဲ့ အရောငျးအဝယျ လုပျနတော ဓလတေ့ဈခုလို ဖွဈနပေါတယျ။ ပုံစံ ၇ ရှိသညျဖွဈစေ၊ မရှိသညျဖွဈစေ အရောငျးအဝယျ လုပျတာ တရားဝငျပါ သလား။ လယျယာမွကေို အရောငျးအဝယျ လုပျရာမှာ တရားဝငျ ဖွဈအောငျ ဘယျလို လုပျရမလဲဆိုတာ သိလိုပါတယျ။
လယျယာမွကေို အရပျစာခြုပျနဲ့ အရောငျးအဝယျ လုပျနတော တရားဝငျသလား၊ ပုံစံ ၇ ရှိ ရှိ မရှိ ရှိ လယျယာမွကေို အရောငျးအဝယျ လုပျလို့ ရသလားလို့မေးလာရငျ ပွနျဖွရေမဲ့ အဖွကေ တိုတိုလေးပါဘဲ။ အရပျစာခြုပျဖွငျ့ ရောငျးဝယျခွငျးသညျ တရား မဝငျပါ။ ပုံစံ ၇ မရှိသညျ့ လယျယာမွကေို ရောငျးဝယျ လှဲပွောငျးခှငျ့ မရှိပါလို့ဘဲ ဖွရေပါမယျ။
အခုလို အရပျသဘော လယျယာမွတှေေ ရောငျးဝယျလှဲပွောငျးနတော ရှိနေ ပါတယျ။ လယျယာမွေ ဥပဒကေ လယျယာမွကေို ရောငျးဝယျခှငျ့ ပေးတာ မဟုတျဘဲ လယျယာမွေ လုပျပိုငျခှငျ့ Right to use the Farmland ကိုသာ လှဲပွောငျး ရောငျးဝယျခှငျ့ ပေးထား တာပါ။ လယျယာမွေ လုပျပိုငျခှငျ့ တဈနညျးဆိုသျော လယျယာမွေ လုပျပိုငျခှငျ့ပွု လကျမှတျ (ပုံစံ ၇) ရှိသူ၊ လယျယာမွကေို တရားဝငျလုပျပိုငျခှငျ့ ရသူကသာ ၄ငျးရရှိထားသညျ့ လုပျပိုငျခှငျ့ကို လှဲပွောငျးရောငျးခနြိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေး ရှိပါတယျ။ လယျယာမွေ ဥပဒေ ပုဒျမ ၉၊ ပုဒျမခှဲ (ခ) မှာ ဒီလို ဆိုထားပါတယျ။
ပုဒျမ ၉။ လယျယာမွေ လုပျပိုငျခှငျ့ ရရှိသူသညျ အောကျပါ အခှငျ့အရေးမြားကို ရရှိစရေမညျ။
(ခ) လယျယာမွေ လုပျပိုငျခှငျ့ ရရှိသူသညျ လယျယာမွကေို အားလုံးဖွဈစေ၊ တဈစိတျ တဈပိုငျးဖွဈစေ၊ လုပျပိုငျခှငျ့အား သတျမှတျထားသော စညျးကမျးခကျြမြားနှငျ့ အညီ ရောငျးခခြှငျ့၊ ပေါငျနှံခှငျ့၊ ငှားရမျးခှငျ့၊ လဲလှယျခှငျ့နှငျ့ ပေးကမျး ခှငျ့ ရရှိစရေမညျ။ သို့သျော လုပျပိုငျခှငျ့အား ရောငျး၊ ပေါငျ၊ ငှား၊ လဲလှယျနှငျ့ ပေးကမျးခွငျး ဆောငျရှကျရာတှငျ ပုဒျမ ၁၂၊ ပုဒျမခှဲ (ဂ) စညျးကမျးခကျြကို လိုကျနာရပါမယျ။
ပုဒျမ ၁၂။ လယျယာမွေ လုပျပိုငျခှငျ့ ရရှိသူသညျ -
(ဂ) လယျယာမွေ လုပျပိုငျခှငျ့ကို ရောငျးခခြွငျး၊ ပေါငျနှံခွငျး၊ ငှားရမျးခွငျး၊ လဲလှယျခွငျးနှငျ့ ပေးကမျးခွငျးတို့ကို ဆောငျရှကျသညျ့အခါ ဦးစီးဌာနက သတျမှတျသညျ့ တံဆိပျခေါငျးခှနျနှငျ့ စာခြုပျစာတမျး မှတျပုံတငျခတို့ကို ပေးဆောငျ၍ သကျဆိုငျရာ မွို့နယျ ဦးစီး ဌာနရုံးတှငျ မှတျပုံတငျရမညျ။ ပုဒျမ ၉ နှငျ့ ပုဒျမ ၁၂ တို့၏ စကားရပျက လယျယာမွေ လုပျပိုငျခှငျ့ ရရှိသူသညျ.. လို့ အစခြီထားသညျ့အတှကျ အထကျပါ ရောငျး ပေါငျ၊ ငှား၊ လဲ၊ ပေး ကိစ်စရပျတှကေို ပုံစံ ၇ ရသူသာ လုပျပိုငျခှငျ့ရှိပွီး ယငျးပုဂ်ဂိုလျသညျ ပုဒျမ ၁၂ (ဂ) အရ တံဆိပျခှနျ ထမျးဆောငျသညျ့ စာခြုပျဖွငျ့ စာခြုပျဆို၍ မွစောရငျး ဦးစီးဌာနတှငျ မှတျပုံတငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ပုဒျမ ၉ ပါ အခှငျ့အရေး ခံစားခှငျ့ ရှိသူသညျ ပုံစံ ၇ ရရှိသူသာ ဖွဈပါတယျ။ ထိုကွောငျ့ လယျယာမွလေုပျပိုငျခှငျ့ကို အရောငျးအဝယျ လုပျခွငျးအတှကျ ရောငျးသူ အနဖွေငျ့ ပုံစံ ၇ ရရှိသူကသာ ရောငျးခနြိုငျခှငျ့ ရှိပွီး ဝယျသူ အနနှေငျ့လညျး ပုံစံ ၇ ရရှိသူ သို့မဟုတျ အမှဆေကျခံသူ သို့မဟုတျ ကိုယျစားလှယျ လှဲအပျသူ ထံကသာ ဝယျယူခှငျ့ ရှိပါမယျ။ လယျယာမွေ လုပျပိုငျခှငျ့ကို ရောငျးခြ၊ ပေါငျနှံ၊ ငှားရမျး၊ လဲလှယျ၊ ပေးကမျးခွငျး မြားကို အရပျ စာခြုပျနဲ့ ဆောငျရှကျခှငျ့ မရှိပါဘူး။ ပုဒျမ ၁၂၊ ပုဒျခှဲ(ဂ)ပါ စညျးကမျးခကျြ အတိုငျး သတျမှတျ တံဆိပျခေါငျးခှနျ ထမျးဆောငျထားသညျ့ စာခြုပျဖွငျ့ ခြုပျဆိုရမညျဖွဈပွီး ယငျး စာခြုပျကို သတျမှတျထားသညျ့ စာခြုပျစာတမျး မှတျပုံတငျခ ပေးဆောငျ၍ မွို့နယျ လယျယာမွေ စီမံခနျ့ခှဲရေးနှငျ့ စာရငျးအငျးဦးစီးဌာနမှာ မှတျပုံတငျ ရပါမယျ။
လယျယာမွဥေပဒေ ပုဒျမ ၉၊ ပုဒျမခှဲ (ခ) ပါ အခှငျ့အရေး ဖွဈသညျ့ "လယျယာမွေ လုပျပိုငျခှငျ့ကို ရောငျးခခြွငျး၊ ပေါငျနှံခွငျး၊ ငှားရမျးခွငျး၊ လဲလှယျခွငျးနှငျ့ ပေးကမျးခွငျးမြား ဆောငျရှကျရနျ သတျမှတျထားသညျ့ ပွဌာနျးခကျြမြားကို နညျးဥပဒမှော ဖျေါပွထားပါတယျ။ နညျးဥပဒေ ၂၄ (က) အရ အထကျပါ ကိစ်စမြားအတှကျ လှဲပွောငျးပေးသူနှငျ့ လှဲပွောငျး လကျခံသူတို့သညျ နှဈဦးသဘောတူ စာခြုပျကို သကျဆိုငျရာ ရပျကှကျ သို့မဟုတျ ကြေးရှာအုပျစု လယျယာမွေ စီမံခနျ့ခှဲမှု အဖှဲ့ရှမှေ့ောကျမှာ တံဆိပျခေါငျးခှနျ ထမျးဆောငျ၍ စာခြုပျခြုပျဆို ရမညျဖွဈပါတယျ။ (ရပျကြေး လယျစီရှမှေ့ောကျတှငျ စာခြုပျ မခြုပျဆိုမီ လှဲပွောငျးရောငျးဝယျသော လယျယာ မွအေား ဒသေန်တရတနျဘိုး ဖွတျပေးရနျ လြှောကျထားခွငျး၊ မွို့နယျလယျစီမှ မွတေနျဘိုး သတျမှတျခွငျး၊ ယငျးတနျဘိုးအရ တနျဘိုး၏ ၂ ရာခိုငျနှုနျးကို တံဆိပျခှနျ ထမျးဆောငျခွငျး၊ ယငျး တံဆိပျခေါငျး ပျေါတှငျ စာခြုပျရေးသား ခြုပျဆိုခွငျး ဆောငျရှကျရမညျ ဖွဈပါတယျ။
ပုဒျမ ၁၂ (ဂ) နှငျ့ နညျး ၂၄ (ခ) အရ စာခြုပျ ခြုပျဆိုသညျ့ နမှေ့စ၍ ရကျပေါငျး (၁၂၀) အတှငျး သကျဆိုငျရာ မွို့နယျ ဦးစီးဌာနရုံးတှငျ မှတျပုံတငျရပါမညျ။ ရောငျးဝယျသော လယျယာမွတေနျဘိုး၏ (၀.၅)% ကို မှတျပုံတငျခအဖွဈ ပေးသှငျးရပါမညျ။ ယငျးသို့ ဆောငျရှကျပွီး သောအခါ နညျးဥပဒေ ၂၅၊ နညျးဥပဒခှေဲ (က) နှငျ့ (ခ) အရ မှတျပုံတငျ အရောငျးအဝယျ စာခြုပျနှငျ့ ပုံစံ ၇ မူရငျး ပူးတှဲ၍ ပုံစံ ၉ ဖွငျ့ မွို့နယျ ဦးစီးဌာနရုံးသို့ လယျယာမွလေုပျပိုငျခှငျ့ ရရှိသူ အမညျပွောငျးလြှောကျထား ဆောငျရှကျရပါမညျ။
အဆိုပါ လုပျငနျးစဉျ မြားအတှကျ ဗဟိုလယျစီမှ ညှနျကွားခကျြ အမှတျ (၂/၂၀၁၉)၊ ညှနျကွားခကျြ အမှတျ (၃/၂၀၁၉) နှငျ့ ညှနျကွားခကျြ အမှတျ (၄/၂၀၁၉) တို့ဖွငျ့ ထုတျပွနျ ညှနျကွားထားပွီး ဖွဈပါတယျ။
DVB မေး // ဆရာဇျော ဖွေ
Credit ... ဆရာဦးဇျောမငျး (နတျမောကျ)
Original Uploader; Sir Myo Min Htun
လယ်ယာမြေကို အရပ်စာချုပ်နဲ့ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်နေတာ ဓလေ့တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ပုံစံ ၇ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်တာ တရားဝင်ပါ သလား။ လယ်ယာမြေကို အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ရာမှာ တရားဝင် ဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ သိလိုပါတယ်။
လယ်ယာမြေကို အရပ်စာချုပ်နဲ့ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်နေတာ တရားဝင်သလား၊ ပုံစံ ၇ ရှိ ရှိ မရှိ ရှိ လယ်ယာမြေကို အရောင်းအ၀ယ် လုပ်လို့ ရသလားလို့မေးလာရင် ပြန်ဖြေရမဲ့ အဖြေက တိုတိုလေးပါဘဲ။ အရပ်စာချုပ်ဖြင့် ရောင်းဝယ်ခြင်းသည် တရား မ၀င်ပါ။ ပုံစံ ၇ မရှိသည့် လယ်ယာမြေကို ရောင်းဝယ် လွှဲပြောင်းခွင့် မရှိပါလို့ဘဲ ဖြေရပါမယ်။
အခုလို အရပ်သဘော လယ်ယာမြေတွေ ရောင်းဝယ်လွှဲပြောင်းနေတာ ရှိနေ ပါတယ်။ လယ်ယာမြေ ဥပဒေက လယ်ယာမြေကို ရောင်းဝယ်ခွင့် ပေးတာ မဟုတ်ဘဲ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် Right to use the Farmland ကိုသာ လွှဲပြောင်း ရောင်းဝယ်ခွင့် ပေးထား တာပါ။ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် တစ်နည်းဆိုသော် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြု လက်မှတ် (ပုံစံ ၇) ရှိသူ၊ လယ်ယာမြေကို တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့် ရသူကသာ ၄င်းရရှိထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လွှဲပြောင်းရောင်းချနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ရှိပါတယ်။ လယ်ယာမြေ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) မှာ ဒီလို ဆိုထားပါတယ်။
ပုဒ်မ ၉။ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသူသည် အောက်ပါ အခွင့်အရေးများကို ရရှိစေရမည်။
(ခ) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသူသည် လယ်ယာမြေကို အားလုံးဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်အား သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့် အညီ ရောင်းချခွင့်၊ ပေါင်နှံခွင့်၊ ငှားရမ်းခွင့်၊ လဲလှယ်ခွင့်နှင့် ပေးကမ်း ခွင့် ရရှိစေရမည်။ သို့သော် လုပ်ပိုင်ခွင့်အား ရောင်း၊ ပေါင်၊ ငှား၊ လဲလှယ်နှင့် ပေးကမ်းခြင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) စည်းကမ်းချက်ကို လိုက်နာရပါမယ်။
ပုဒ်မ ၁၂။ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသူသည် -
(ဂ) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ပေးကမ်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သည့်အခါ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှင့် စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ခတို့ကို ပေးဆောင်၍ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ဦးစီး ဌာနရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။ ပုဒ်မ ၉ နှင့် ပုဒ်မ ၁၂ တို့၏ စကားရပ်က လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသူသည်.. လို့ အစချီထားသည့်အတွက် အထက်ပါ ရောင်း ပေါင်၊ ငှား၊ လဲ၊ ပေး ကိစ္စရပ်တွေကို ပုံစံ ၇ ရသူသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ယင်းပုဂ္ဂိုလ်သည် ပုဒ်မ ၁၂ (ဂ) အရ တံဆိပ်ခွန် ထမ်းဆောင်သည့် စာချုပ်ဖြင့် စာချုပ်ဆို၍ မြေစာရင်း ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုဒ်မ ၉ ပါ အခွင့်အရေး ခံစားခွင့် ရှိသူသည် ပုံစံ ၇ ရရှိသူသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကြောင့် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ခြင်းအတွက် ရောင်းသူ အနေဖြင့် ပုံစံ ၇ ရရှိသူကသာ ရောင်းချနိုင်ခွင့် ရှိပြီး ၀ယ်သူ အနေနှင့်လည်း ပုံစံ ၇ ရရှိသူ သို့မဟုတ် အမွေဆက်ခံသူ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်သူ ထံကသာ ၀ယ်ယူခွင့် ရှိပါမယ်။ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရောင်းချ၊ ပေါင်နှံ၊ ငှားရမ်း၊ လဲလှယ်၊ ပေးကမ်းခြင်း များကို အရပ် စာချုပ်နဲ့ ဆောင်ရွက်ခွင့် မရှိပါဘူး။ ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်ခွဲ(ဂ)ပါ စည်းကမ်းချက် အတိုင်း သတ်မှတ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ထားသည့် စာချုပ်ဖြင့် ချုပ်ဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်း စာချုပ်ကို သတ်မှတ်ထားသည့် စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ခ ပေးဆောင်၍ မြို့နယ် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှာ မှတ်ပုံတင် ရပါမယ်။
လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ အခွင့်အရေး ဖြစ်သည့် "လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ပေးကမ်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ပြဌာန်းချက်များကို နည်းဥပဒေမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ နည်းဥပဒေ ၂၄ (က) အရ အထက်ပါ ကိစ္စများအတွက် လွှဲပြောင်းပေးသူနှင့် လွှဲပြောင်း လက်ခံသူတို့သည် နှစ်ဦးသဘောတူ စာချုပ်ကို သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ရှေ့မှောက်မှာ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်၍ စာချုပ်ချုပ်ဆို ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ (ရပ်ကျေး လယ်စီရှေ့မှောက်တွင် စာချုပ် မချုပ်ဆိုမီ လွှဲပြောင်းရောင်းဝယ်သော လယ်ယာ မြေအား ဒေသန္တရတန်ဘိုး ဖြတ်ပေးရန် လျှောက်ထားခြင်း၊ မြို့နယ်လယ်စီမှ မြေတန်ဘိုး သတ်မှတ်ခြင်း၊ ယင်းတန်ဘိုးအရ တန်ဘိုး၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းကို တံဆိပ်ခွန် ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ ယင်း တံဆိပ်ခေါင်း ပေါ်တွင် စာချုပ်ရေးသား ချုပ်ဆိုခြင်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ပုဒ်မ ၁၂ (ဂ) နှင့် နည်း ၂၄ (ခ) အရ စာချုပ် ချုပ်ဆိုသည့် နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း (၁၂၀) အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ဦးစီးဌာနရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ရပါမည်။ ရောင်းဝယ်သော လယ်ယာမြေတန်ဘိုး၏ (၀.၅)% ကို မှတ်ပုံတင်ခအဖြစ် ပေးသွင်းရပါမည်။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ပြီး သောအခါ နည်းဥပဒေ ၂၅၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က) နှင့် (ခ) အရ မှတ်ပုံတင် အရောင်းအ၀ယ် စာချုပ်နှင့် ပုံစံ ၇ မူရင်း ပူးတွဲ၍ ပုံစံ ၉ ဖြင့် မြို့နယ် ဦးစီးဌာနရုံးသို့ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသူ အမည်ပြောင်းလျှောက်ထား ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ် များအတွက် ဗဟိုလယ်စီမှ ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၂/၂၀၁၉)၊ ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၃/၂၀၁၉) နှင့် ညွန်ကြားချက် အမှတ် (၄/၂၀၁၉) တို့ဖြင့် ထုတ်ပြန် ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
DVB မေး // ဆရာဇော် ဖြေ
Credit ... ဆရာဦးဇော်မင်း (နတ်မောက်)
Posted by Alex Aung at 10:30 PM No comments:
Labels: News and Info, ဗဟုသုတ
Claypot Chicken Rice - Mexican Tomato Rice - ဝကျသားဆေးဘဲဥထမငျးကွျော
(Claypot Chicken Rice)
• ကွကျသား - ၂၅၀ ဂရမျ
• ကွကျသှနျဖွူ - ၁၀ ဂရမျ
• ခငျြး - ၁၀ ဂရမျ
• ပဲငံပွာရညျအနောကျ - စားပှဲဇှနျး ၁ ဇှနျး
• ခရုဆီ - စားပှဲဇှနျး ၁ ဇှနျး
• နှမျးဆီ - စားပှဲဇှနျး ၁ ဇှနျး
• ဟငျးခကျြဝိုငျ - စားပှဲဇှနျး ၁ ဇှနျး
• ငရုတျကောငျးမှုနျ့ - လကျဖကျရညျဇှနျး ၁/၂ ဇှနျး
• သကွား - လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျး
• ကျောမှုနျ့ - စားပှဲဇှနျး ၁ ဇှနျး
• ဆား - လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျး
• ဆနျ - ၂၅၀ ဂရမျ
(ပေါငျးအိုးဆနျခြိနျခှကျ - ၁ ခှကျခှဲ)
• ရေ - ၄ဝဝ မီလီလီတာ
• ကွကျသှနျနီ - ၈၀ ဂရမျ
• ဆီ - စားပှဲဇှနျး ၄ ဇှနျး
• ကွကျအူခြောငျး - ၁ဝဝ ဂရမျ
• ကွကျသှနျမွိတျ - ၁၀ ဂရမျ
• ပဲငံပွာရညျအကွညျ - စားပှဲဇှနျး ၃ ဇှနျး
• ဆီခကျြ - စားပှဲဇှနျး ၁ ဇှနျး
၁။ ကွကျသားကို ပါးပါးလှီးပွီး ဇလုံထဲ ထညျ့ပါ။ ထောငျးထားသော ကွကျသှနျဖွူနှငျ့ ခငျြး၊ ငရုတျ ကောငျးမှုနျ့၊ ပဲငံပွာရညျအနောကျ၊ သကွား၊ ခရုဆီ၊ ဟငျးခကျြဝိုငျ၊ နှမျးဆီ၊ ကျောမှုနျ့နှငျ့ ဆားတို့ကို ထညျ့၍ သမအောငျနယျပွီး မိနဈ ၃၀ ခနျ့ နှပျထားပါ။
၂။ ကွကျသှနျနီကို ပါးပါးလှီးပွီး အိုးထဲ ဆီထညျ့၍ မီးအေးအေးဖွငျ့ ကွကျသှနျမြား ရှညေိုရောငျ သနျးလာသညျအထိ ကွျောပွီး ဆီစဈထားပါ။ ကွကျအူခြောငျးကို တဇောငျးပုံစံအပွားလေးတှေ လှီးပွီး ဆီအနညျးငယျဖွငျ့ ကွျောထားပါ။
၃။ ဆနျကို သခြောစှာ ရဆေေးပွီး ထမငျးပေါငျးခကျြမညျ့အိုးထဲထညျ့၍ ရထေညျ့ပွီး ဆူအောငျ တညျပါ။ ထမငျးလုံးမြား အလုံးလိုကျဖွဈလာပွီး ရအေနညျးငယျခနျ့ ကနျြပါက နှပျထားသော ကွကျသားမြားကို ထမငျးအပျေါမှာ ထညျ့၍ ၁၀ မိနဈခနျ့ မီးအေးအေးဖွငျ့ အဖုံးအုပျပွီး တညျထားပါ။
၄။ ထမငျးထဲထညျ့မညျ့ ဆော့ဈအတှကျ ပနျးကနျထဲ ပဲငံပွာရညျအကွညျ၊ ခရုဆီ၊ ဆီခကျြနှငျ့ နှမျးဆီ တို့ကို ထညျ့ပွီး သမအောငျ မှပေါ။
၅။ ထညျ့ထားသော ကွကျသားမြားကကျြလြှငျ ကွျောထားသောကွကျအူခြောငျးမြားကို အပျေါမှာ သခြောစီထညျ့ပါ။ အရသာအတှကျ စပျထားသောဆော့ဈကို နှံ့စပျအောငျ အပျေါမှာ လောငျး ထညျ့ပွီး ၅ မိနဈခနျ့ မီးအေးအေးဖွငျ့ ဆကျ၍ နှပျထားပါ။
၆။ ကွျောထားသော ကွကျသှနျကွျောနှငျ့ ပါးပါးလှီးထားသော ကွကျသှနျမွိတျတို့ကို အပျေါမှာ ထပျဖွူးပွီး သုံးဆောငျနိုငျပါပွီ။
Htain Lin Maung
အငျဒိုနီးရှားအမဲသားခကျြ (Beef Rendang)
• အမဲသား - ၅ဝဝ ဂရမြ
• ကွကျသှနျနီ - ၅၀ ဂရမျ
• ကွကျသှနျဖွူ - ၃၀ ဂရမျ
• ခငျြး - ၁၅ ဂရမျ
• ပတဲကော - ၁၅ ဂရမျ
• စပါးလငျ - ၁၅ ဂရမျ
• မနျကညျြးနှဈအရညျ - စားပှဲဇှနျး ၃ ဇှနျး
• ငရုတျသီးအခွာကျတောငျ့ - ၁၅ တောငျ့
• သကွား - လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ၁/၂ ဇှနျး
• အုနျးနို့ - စားပှဲဇှနျး ၅ ဇှနျး
• ဆီ - စားပှဲဇှနျး ၃ ဇှနျး
• နာနတျပှငျ့ - ၃ ပှငျ့
• သဈကွံပိုးခေါကျ - ၁ ခု
• ဖာလာစေ့ - ၈ စေ့
• ရေ - ၃ဝဝ မီလီလီတာ
၁။ ငရုတျသီးအခွောကျတောငျ့ကို ရနှေေးဖွငျ့ ပွုတျပွီး ရစေဈထားပါ။ ကွကျသှနျဖွူ၊ ကွကျသှနျနီ၊ ပတဲကော၊ ခငျြးတို့ကို အခှံနှာပွီး ပါးပါးလေးတှေ လှီးထားပါ။ စပါးလငျ ကိုလညျး ပါးပါးလှီးထားပါ။ ငရုတျသီးအခွောကျတောငျ့နှငျ့ ပါးပါးလှီးထားသော ပါဝငျပစ်စညျးမြားကို ကွိတျစကျထဲ ထညျ့ပွီး ကွညေကျအောငျ ကွိတျထား ပါ။
၂။ အိုးထဲ ဆီထညျ့၍ ကွိတျထားသောအရာမြားကို ထညျ့ပွီး ၂ မိနဈခနျ့ မှပေါ။ အုနျးနို့ကို လောငျးထညျ့၍ အမဲသားထညျ့ပွီး သမအောငျ မှပေါ။ အမဲသားမြားဆီပွနျလာလြှငျ ရထေညျ့ပွီး မီးအေးအေးဖွငျ့ မိနဈ ၂၀ ခနျ့ ခကျြပါ။ အရသာအတှကျ ဆား၊ သကွားနှငျ့ မနျကညျြးနှဈအရညျတို့ကို ထညျ့ပါ။ ထညျ့ထားသော အမဲသားမြားနူးပွီး ရခေနျးသှား လြှငျ ပါးပါးလှီးထားသော ရှောကျရှကျမြားကို ထညျ့၍ ထမငျးနှငျ့ သုံးဆောငျနိုငျပါပွီ။
• ငရုတျသီးခွာကျ - ၈ တောငျ့ (ရစေိမျထားတာ)
• ကွကျသှနျနီ - ၃၅ ဂရမျ
• ကွကျသှနျဖွူ - ၁၅ ဂရမျ
• ကွကျသှနျမွိတျ - ၅ ဂရမျ
• စပါးလငျ - ၅ ဂရမျ
• စိမျးစားငါးပိ - လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျး
• နံနံစေ့ - လကျဖကျရညျဇှနျး ၃ ဇှနျး
• နာနတျပှငျ့ - ၂ ပှငျ့
• လေးညှငျးပှငျ့ - ၈ ပှငျ့
• ငံပွာရညျ - စားပှဲဇှနျး ၂ ဇှနျး
၁။ ဆယျလမှနျ ယိုးဒယားသုပျပွုလုပျဖို့အတှကျ ပထမဆုံး ရစေိမျထားတဲ့ ငရုတျသီးခွောကျ ကို လှျောပါမယျ။ ပွီးလြှငျ ကွကျသှနျနီ၊ ကွကျသှနျဖွူ၊ ကွကျသှနျမွိတျ တို့ကို ၂ မိနဈခနျ့ လှျောပါ။ ပွီးလြှငျ တဈဆကျတညျး နံနံစေ့၊ လေးညှငျးပှငျ့၊ နာနတျပှငျ့တို့ကို ထညျ့ပွီး
၂။ ကွိတျစကျထဲကို လှျောထားတာတှေ အကုနျထညျ့ပွီး ငံပွာရညျထညျ့ကာ ကွိတျပေးရ ပါမယျ။
၃။ ဒယျအိုးတငျပွီး စိမျးစားငါးပိထညျ့ကာ ဆီအရငျသတျပေးပါ။ အဲဒီဆီသတျထားတဲ့
အထဲကို ကွိတျထားတဲ့အနှဈတှထေညျ့ပွီး နောကျထပျ ဆီသတျပေးရပါမယျ။ ပွီးလြှငျ
၄။ ဆယျလမှနျအစိမျးကို အတုံးလေးတှေ လှီးထားပါ။ နံနံပငျကိုလညျး နုပျနုပျစဉျးထားပေးပါ။
၅။ နောကျဆုံးမှာတော့ ဇလုံတဈခုထဲကို အအေးခံထားတဲ့ အနှဈထညျ့၊ ဆယျလမှနျ ထညျ့၊ နံနံပငျထညျ့ကာ သမအောငျ အသာလေးနယျပါ။ ပွီးလြှငျ သုံးဆောငျနိုငျပါပွီ။
Shwe Min Eain
ဖိလဈပိုငျ ကွကျသားခကျြ (Adobo Chicken)
• ကွကျသား - ၆ဝဝ ဂရမျ
• ကရဝေးရှကျ - ၄ ရှကျ
• ပဲငံပွာရညျအကွညျ - စားပှဲဇှနျး ၂ ဇှနျး
• ပဲငံပွာရညျအနောကျ - စားပှဲဇှနျး ၂ ဇှနျး
• ကွကျသှနျဖွူ - ၂၅ ဂရမျ (ထောငျးထားပါ)
• ကွကျသှနျနီ - ၅၀ ဂရမျ (ပါးပါးလှီးပါ)
• ငရုတျကောငျးစေ့ - ၇ ဂရမျ (မညကျတညကျထောငျးပါ)
• ရှလကာရညျ - စားပှဲဇှနျး ၁ ဇှနျး
၁။ ဇလုံထဲ ကွကျသားမြားထညျ့ပွီး ပဲငံပွာရညျအနောကျ၊ ပဲငံပွာရညျအကွညျနှငျ့ ထောငျးထားသော ကွကျသှနျဖွူတို့ကို ထညျ့၍ သမအောငျနယျပွီး မိနဈ ၃၀ ခနျ့ နှပျထားပါ။
၂။ အိုးထဲ ဆီထညျ့ပွီး ပါးပါးလှီးထားသော ကွကျသှနျနီမြားကို ဆီစဈထားပါ။ ကရဝေး ရှကျနှငျ့ မညကျတညကျထောငျးထားသော ငရုတျကောငျးစမြေ့ားကို ထညျ့ပါ။
၃။ နှပျထားသော ကွကျသားမြားကို ထညျ့၍ သမအောငျမှပွေီး ကွကျသားမြား ဆီပွနျ လာသညျအထိ ခကျြပါ။
၄။ ကွကျသားမြား ဆီပွနျလာလြှငျ ရထေညျ့၍ အဖုံးအုပျပွီး မိနဈ ၂၀ ခနျ့ ခကျြပါ။ ထညျ့ထားသောရမြေား တဈဝကျခနျ့ ခနျးလြှငျ အရသာအတှကျ ဆား၊ သကွားနှငျ့ ရှလကာရညျတို့ကို ထညျ့ပွီး သမအောငျ မှပေါ။
၅။ ကွကျသားမြားနူးအိပွီး ထညျ့ထားသော ရမြေားခနျးလြှငျ အရသာကို မွညျးစမျးပွီး စားသုံးနိုငျပါပွီ။
ခရမျးခဉျြသီးထမငျး (Mexican Tomato Rice)
• ဆနျ - ၃၂၀ ဂရမျ
( ပေါငျးအိုးဆနျခြိနျခှကျ ၂ ခှကျ)
• ခရမျးခဉျြသီး - ၃ဝဝ ဂရမျ
• ငရုတျသီးဆော့ဈ - လကျဖကျရညျဇှနျး ၂ ဇှနျး
• ထောပတျ - ၃၀ ဂရမျ
• ငရုတျကောငျး - ၃ ဂရမျ
• ကရ‌ဝေးရှကျ - ၂ ရှကျ
Vegetable stock ပွုလုပျရနျအတှကျ
• မုနျလာဥ - ၁ဝဝ ဂရမျ
• ကွကျသှနျနီ - ၇၀ ဂရမျ
• ကွကျသှနျမွိတျအကွီး - ၇၀ ဂရမျ
• ကွကျသှနျဖွူ - ၂၀ ဂရမျ
• ကရဝေးရှကျ - ၂ ရှကျ
• ရေ - ၁ လီတာ
၁။ Vegetable stock ပွုလုပျရနျအတှကျ မုနျလာဥနီ၊ ကွကျသှနျနီ၊ ကွကျသှနျဖွူတို့ကို အခှံခှာရဆေေးပွီး အတုံးပုံစံလေးတှေ လှီးပေးပါ။ ကွကျသှနျမွိတျအကွီးကိုလညျး
လှီးပေးပါ။ ခကျြမညျ့အိုးထဲသို့ လှီးထားသော အသီးအရှကျမြားကို ထညျ့ပွီး ရေ ထညျ့ကာ ဆူအောငျ တညျပေးပါ။ ရဆေူလာပါက အရသာအတှကျ ဆားထညျ့ပွီး မီးအေးအေး ဖွငျ့ အသီးအရှကျမြား အခြိုရညျမြားထှကျလာသညျအထိ မိနဈ ၃၀ ခနျ့ ခကျြထားပေးပါ။
၂။ ခရမျးခဉျြသီးကို နုပျနုပျစဉျးပွီး ကွိတျထားပေးပါ။ ထမငျးခကျြမညျ့ အိုးထဲသို့ ထောပတျထညျ့ပွီး နုပျနုပျစဉျးထားသော ကွကျသှနျဖွူမြားထညျ့ကာ ဆီသတျပေးပါ။ ငရုတျကောငျး စေ့၊ ကရ‌ဝေးရှကျ၊ ငရုတျသီးဆော့ဈတို့ကို ထညျ့ပေးပါ။ ကွိတျထား သော ခရမျးခဉျြသီးတို့ကို ထညျ့ပွီး ဆီပွနျလာသညျအထိ မှပေေးပါ။ ရဆေေးထားသော ဆနျကို ထညျ့ပွီး ခကျြထား သော အသီးအရှကျပွုတျရညျကို ထညျ့ပေးပါ။ မီးအေးအေးဖွငျ့ ထညျ့ထားသော အရညျမြားခနျးအောငျအထိ ခကျြပေးပါ။ ထမငျးကကျြပါက အပျေါမှ နံနံပငျလေးမြား ဖွူးပွီး စားသုံးနိုငျပါပွီ။
• ဝကျသား - ၈၀ ဂရမျ
• ဆေးဘဲဥ - ၃ လုံး
• ထမငျးဖွူ - ၁ ပှဲ
• ကှကြဥ - ၁ လုံး
• ဆီ - စားပှဲဇှနျး ၂ ဇှနျး
• ဆား - အနညျးငယျ
• သကွား - အနညျးငယျ
• ငရုတျကောငျးမှုနျ့ - အနညျးငယျ
• တရုတျမဆလာ - အနညျးငယျ
• ပဲငံပွာရညျအကွညျ - အနညျးငယျ
• ပဲငံပွာရညျအနောကျ - အနညျးငယျ
• ကွကျသှနျမွိတျ - အနညျးငယျ
• ကွကျသှနျဖွူ - ၃ မွှာ
• ခရမျးခဉျြသီး - ၁ လုံး
( ပါးပါးလှီးပါ) (တှဲဖကျစားရနျ)
• သခှားသီး - အနညျးငယျ
• ဆလတျရှကျ - အနညျးငယျ
ဒယျအိုးကို အပူပေးပွီး ဆီထညျ့ပါ။ ဆီပူလာရငျ ကွကျသှနျဖွူကို ဆီသတျပါ။ ကွကျသှနျဖွူ အနံ့မှေး လာပွီဆိုရငျ ဝကျသားထညျ့ပွီး ဆီသတျပေးပါ။ ဝကျသား အနံ့မှေးလာပွီဆိုရငျ ကွကျဥ ထညျ့ပွီးမှပေါ။ ထမငျး ထညျ့ပါ။ အရသာအနနေဲ့ ဆား၊ ငရုတျကောငျး၊ တရုတျ မဆလာ၊ ခရုဆီ၊ ပဲငံပွာရညျအနောကျ၊ ပဲငံပွာရညျ
အကွညျ၊ သကွားတို့ကို ထညျ့ပေးပါ။ ပွီးလြှငျ ဆေးဘဲဥ ထညျ့ပါ။ ကွကျသှနျမွိတျဖွူးပွီး သုံးဆောငျနိုငျပါပွီ။
• ကြက်သား - ၂၅၀ ဂရမ်
• ကြက်သွန်ဖြူ - ၁၀ ဂရမ်
• ချင်း - ၁၀ ဂရမ်
• ပဲငံပြာရည်အနောက် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• နှမ်းဆီ - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ဟင်းချက်ဝိုင် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ငရုတ်ကောင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
• ဆန် - ၂၅၀ ဂရမ်
(ပေါင်းအိုးဆန်ချိန်ခွက် - ၁ ခွက်ခွဲ)
• ရေ - ၄ဝဝ မီလီလီတာ
• ကြက်သွန်နီ - ၈၀ ဂရမ်
• ဆီ - စားပွဲဇွန်း ၄ ဇွန်း
• ကြက်အူချောင်း - ၁ဝဝ ဂရမ်
• ကြက်သွန်မြိတ် - ၁၀ ဂရမ်
• ပဲငံပြာရည်အကြည် - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
• ဆီချက် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
၁။ ကြက်သားကို ပါးပါးလှီးပြီး ဇလုံထဲ ထည့်ပါ။ ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ချင်း၊ ငရုတ် ကောင်းမှုန့်၊ ပဲငံပြာရည်အနောက်၊ သကြား၊ ခရုဆီ၊ ဟင်းချက်ဝိုင်၊ နှမ်းဆီ၊ ကော်မှုန့်နှင့် ဆားတို့ကို ထည့်၍ သမအောင်နယ်ပြီး မိနစ် ၃၀ ခန့် နှပ်ထားပါ။
၂။ ကြက်သွန်နီကို ပါးပါးလှီးပြီး အိုးထဲ ဆီထည့်၍ မီးအေးအေးဖြင့် ကြက်သွန်များ ရွှေညိုရောင် သန်းလာသည်အထိ ကြော်ပြီး ဆီစစ်ထားပါ။ ကြက်အူချောင်းကို တဇောင်းပုံစံအပြားလေးတွေ လှီးပြီး ဆီအနည်းငယ်ဖြင့် ကြော်ထားပါ။
၃။ ဆန်ကို သေချာစွာ ရေဆေးပြီး ထမင်းပေါင်းချက်မည့်အိုးထဲထည့်၍ ရေထည့်ပြီး ဆူအောင် တည်ပါ။ ထမင်းလုံးများ အလုံးလိုက်ဖြစ်လာပြီး ရေအနည်းငယ်ခန့် ကျန်ပါက နှပ်ထားသော ကြက်သားများကို ထမင်းအပေါ်မှာ ထည့်၍ ၁၀ မိနစ်ခန့် မီးအေးအေးဖြင့် အဖုံးအုပ်ပြီး တည်ထားပါ။
၄။ ထမင်းထဲထည့်မည့် ဆော့စ်အတွက် ပန်းကန်ထဲ ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ ခရုဆီ၊ ဆီချက်နှင့် နှမ်းဆီ တို့ကို ထည့်ပြီး သမအောင် မွှေပါ။
၅။ ထည့်ထားသော ကြက်သားများကျက်လျှင် ကြော်ထားသောကြက်အူချောင်းများကို အပေါ်မှာ သေချာစီထည့်ပါ။ အရသာအတွက် စပ်ထားသောဆော့စ်ကို နှံ့စပ်အောင် အပေါ်မှာ လောင်း ထည့်ပြီး ၅ မိနစ်ခန့် မီးအေးအေးဖြင့် ဆက်၍ နှပ်ထားပါ။
၆။ ကြော်ထားသော ကြက်သွန်ကြော်နှင့် ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်မြိတ်တို့ကို အပေါ်မှာ ထပ်ဖြူးပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
အင်ဒိုနီးရှားအမဲသားချက် (Beef Rendang)
• အမဲသား - ၅ဝဝ ဂရမျ
• ကြက်သွန်နီ - ၅၀ ဂရမ်
• ကြက်သွန်ဖြူ - ၃၀ ဂရမ်
• ချင်း - ၁၅ ဂရမ်
• ပတဲကော - ၁၅ ဂရမ်
• စပါးလင် - ၁၅ ဂရမ်
• မန်ကျည်းနှစ်အရည် - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
• ငရုတ်သီးအခြာက်တောင့် - ၁၅ တောင့်
• သကြား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ၁/၂ ဇွန်း
• အုန်းနို့ - စားပွဲဇွန်း ၅ ဇွန်း
• နာနတ်ပွင့် - ၃ ပွင့်
• သစ်ကြံပိုးခေါက် - ၁ ခု
• ဖာလာစေ့ - ၈ စေ့
• ရေ - ၃ဝဝ မီလီလီတာ
၁။ ငရုတ်သီးအခြောက်တောင့်ကို ရေနွေးဖြင့် ပြုတ်ပြီး ရေစစ်ထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ပတဲကော၊ ချင်းတို့ကို အခွံနွှာပြီး ပါးပါးလေးတွေ လှီးထားပါ။ စပါးလင် ကိုလည်း ပါးပါးလှီးထားပါ။ ငရုတ်သီးအခြောက်တောင့်နှင့် ပါးပါးလှီးထားသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ကြိတ်စက်ထဲ ထည့်ပြီး ကြေညက်အောင် ကြိတ်ထား ပါ။
၂။ အိုးထဲ ဆီထည့်၍ ကြိတ်ထားသောအရာများကို ထည့်ပြီး ၂ မိနစ်ခန့် မွှေပါ။ အုန်းနို့ကို လောင်းထည့်၍ အမဲသားထည့်ပြီး သမအောင် မွှေပါ။ အမဲသားများဆီပြန်လာလျှင် ရေထည့်ပြီး မီးအေးအေးဖြင့် မိနစ် ၂၀ ခန့် ချက်ပါ။ အရသာအတွက် ဆား၊ သကြားနှင့် မန်ကျည်းနှစ်အရည်တို့ကို ထည့်ပါ။ ထည့်ထားသော အမဲသားများနူးပြီး ရေခန်းသွား လျှင် ပါးပါးလှီးထားသော ရှောက်ရွက်များကို ထည့်၍ ထမင်းနှင့် သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
• ငရုတ်သီးခြာက် - ၈ တောင့် (ရေစိမ်ထားတာ)
• ကြက်သွန်နီ - ၃၅ ဂရမ်
• ကြက်သွန်မြိတ် - ၅ ဂရမ်
• စပါးလင် - ၅ ဂရမ်
• စိမ်းစားငါးပိ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
• နံနံစေ့ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း
• နာနတ်ပွင့် - ၂ ပွင့်
• လေးညှင်းပွင့် - ၈ ပွင့်
• ငံပြာရည် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
၁။ ဆယ်လမွန် ယိုးဒယားသုပ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ပထမဆုံး ရေစိမ်ထားတဲ့ ငရုတ်သီးခြောက် ကို လှော်ပါမယ်။ ပြီးလျှင် ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်မြိတ် တို့ကို ၂ မိနစ်ခန့် လှော်ပါ။ ပြီးလျှင် တစ်ဆက်တည်း နံနံစေ့၊ လေးညှင်းပွင့်၊ နာနတ်ပွင့်တို့ကို ထည့်ပြီး
၂။ ကြိတ်စက်ထဲကို လှော်ထားတာတွေ အကုန်ထည့်ပြီး ငံပြာရည်ထည့်ကာ ကြိတ်ပေးရ ပါမယ်။
၃။ ဒယ်အိုးတင်ပြီး စိမ်းစားငါးပိထည့်ကာ ဆီအရင်သတ်ပေးပါ။ အဲဒီဆီသတ်ထားတဲ့
အထဲကို ကြိတ်ထားတဲ့အနှစ်တွေထည့်ပြီး နောက်ထပ် ဆီသတ်ပေးရပါမယ်။ ပြီးလျှင်
၄။ ဆယ်လမွန်အစိမ်းကို အတုံးလေးတွေ လှီးထားပါ။ နံနံပင်ကိုလည်း နုပ်နုပ်စဉ်းထားပေးပါ။
၅။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဇလုံတစ်ခုထဲကို အအေးခံထားတဲ့ အနှစ်ထည့်၊ ဆယ်လမွန် ထည့်၊ နံနံပင်ထည့်ကာ သမအောင် အသာလေးနယ်ပါ။ ပြီးလျှင် သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ဖိလစ်ပိုင် ကြက်သားချက် (Adobo Chicken)
• ကြက်သား - ၆ဝဝ ဂရမ်
• ကရဝေးရွက် - ၄ ရွက်
• ပဲငံပြာရည်အကြည် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ပဲငံပြာရည်အနောက် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ကြက်သွန်ဖြူ - ၂၅ ဂရမ် (ထောင်းထားပါ)
• ကြက်သွန်နီ - ၅၀ ဂရမ် (ပါးပါးလှီးပါ)
• ငရုတ်ကောင်းစေ့ - ၇ ဂရမ် (မညက်တညက်ထောင်းပါ)
• ရှလကာရည် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
၁။ ဇလုံထဲ ကြက်သားများထည့်ပြီး ပဲငံပြာရည်အနောက်၊ ပဲငံပြာရည်အကြည်နှင့် ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူတို့ကို ထည့်၍ သမအောင်နယ်ပြီး မိနစ် ၃၀ ခန့် နှပ်ထားပါ။
၂။ အိုးထဲ ဆီထည့်ပြီး ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်နီများကို ဆီစစ်ထားပါ။ ကရဝေး ရွက်နှင့် မညက်တညက်ထောင်းထားသော ငရုတ်ကောင်းစေ့များကို ထည့်ပါ။
၃။ နှပ်ထားသော ကြက်သားများကို ထည့်၍ သမအောင်မွှေပြီး ကြက်သားများ ဆီပြန် လာသည်အထိ ချက်ပါ။
၄။ ကြက်သားများ ဆီပြန်လာလျှင် ရေထည့်၍ အဖုံးအုပ်ပြီး မိနစ် ၂၀ ခန့် ချက်ပါ။ ထည့်ထားသောရေများ တစ်ဝက်ခန့် ခန်းလျှင် အရသာအတွက် ဆား၊ သကြားနှင့် ရှလကာရည်တို့ကို ထည့်ပြီး သမအောင် မွှေပါ။
၅။ ကြက်သားများနူးအိပြီး ထည့်ထားသော ရေများခန်းလျှင် အရသာကို မြည်းစမ်းပြီး စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
ခရမ်းချဉ်သီးထမင်း (Mexican Tomato Rice)
• ဆန် - ၃၂၀ ဂရမ်
( ပေါင်းအိုးဆန်ချိန်ခွက် ၂ ခွက်)
• ခရမ်းချဉ်သီး - ၃ဝဝ ဂရမ်
• ငရုတ်သီးဆော့စ် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ထောပတ် - ၃၀ ဂရမ်
• ငရုတ်ကောင်း - ၃ ဂရမ်
• ကရ‌ဝေးရွက် - ၂ ရွက်
Vegetable stock ပြုလုပ်ရန်အတွက်
• မုန်လာဥ - ၁ဝဝ ဂရမ်
• ကြက်သွန်နီ - ၇၀ ဂရမ်
• ကြက်သွန်မြိတ်အကြီး - ၇၀ ဂရမ်
• ကြက်သွန်ဖြူ - ၂၀ ဂရမ်
• ကရဝေးရွက် - ၂ ရွက်
• ရေ - ၁ လီတာ
၁။ Vegetable stock ပြုလုပ်ရန်အတွက် မုန်လာဥနီ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူတို့ကို အခွံခွာရေဆေးပြီး အတုံးပုံစံလေးတွေ လှီးပေးပါ။ ကြက်သွန်မြိတ်အကြီးကိုလည်း
လှီးပေးပါ။ ချက်မည့်အိုးထဲသို့ လှီးထားသော အသီးအရွက်များကို ထည့်ပြီး ရေ ထည့်ကာ ဆူအောင် တည်ပေးပါ။ ရေဆူလာပါက အရသာအတွက် ဆားထည့်ပြီး မီးအေးအေး ဖြင့် အသီးအရွက်များ အချိုရည်များထွက်လာသည်အထိ မိနစ် ၃၀ ခန့် ချက်ထားပေးပါ။
၂။ ခရမ်းချဉ်သီးကို နုပ်နုပ်စဉ်းပြီး ကြိတ်ထားပေးပါ။ ထမင်းချက်မည့် အိုးထဲသို့ ထောပတ်ထည့်ပြီး နုပ်နုပ်စဉ်းထားေ
သာ ကြက်သွန်ဖြူများထည့်ကာ ဆီသတ်ပေးပါ။ ငရုတ်ကောင်း စေ့၊ ကရ‌ဝေးရွက်၊ ငရုတ်သီးဆော့စ်တို့ကို ထည့်ပေးပါ။ ကြိတ်ထား သော ခရမ်းချဉ်သီးတို့ကို ထည့်ပြီး ဆီပြန်လာသည်အထိ မွှေပေးပါ။ ရေဆေးထားသော ဆန်ကို ထည့်ပြီး ချက်ထား သော အသီးအရွက်ပြုတ်ရည်ကို ထည့်ပေးပါ။ မီးအေးအေးဖြင့် ထည့်ထားသော အရည်များခန်းအောင်အထိ ချက်ပေးပါ။ ထမင်းကျက်ပါက အပေါ်မှ နံနံပင်လေးများ ဖြူးပြီး စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
• ဝက်သား - ၈၀ ဂရမ်
• ဆေးဘဲဥ - ၃ လုံး
• ထမင်းဖြူ - ၁ ပွဲ
• ကွကျဥ - ၁ လုံး
• ပဲငံပြာရည်အကြည် - အနည်းငယ်
• ပဲငံပြာရည်အနောက် - အနည်းငယ်
• ခရမ်းချဉ်သီး - ၁ လုံး
( ပါးပါးလှီးပါ) (တွဲဖက်စားရန်)
• သခွားသီး - အနည်းငယ်
• ဆလတ်ရွက် - အနည်းငယ်
ဒယ်အိုးကို အပူပေးပြီး ဆီထည့်ပါ။ ဆီပူလာရင် ကြက်သွန်ဖြူကို ဆီသတ်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ အနံ့မွှေး လာပြီဆိုရင် ဝက်သားထည့်ပြီး ဆီသတ်ပေးပါ။ ဝက်သား အနံ့မွှေးလာပြီဆိုရင် ကြက်ဥ ထည့်ပြီးမွှေပါ။ ထမင်း ထည့်ပါ။ အရသာအနေနဲ့ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်း၊ တရုတ် မဆလာ၊ ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည်အနောက်၊ ပဲငံပြာရည်
အကြည်၊ သကြားတို့ကို ထည့်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ဆေးဘဲဥ ထည့်ပါ။ ကြက်သွန်မြိတ်ဖြူးပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Alex Aung at 2:30 AM No comments:
🌸🌸စီးပှားဖွဈ စံပယျစိုကျပြိုးနညျး 🌸🌸
ဘာကွောငျ့ စံပယျစိုကျပြိုးသငျ့တာလဲ !
➤ စံပယျပနျးကို ရှစေံပယျ၊ ကွကျရုနျးကွီး၊ ကွကျရုနျးကလေး၊ ဘိတျကွီး၊ ဘိတျကလေး၊ စံပယျလညျဆံ ၊ ဆယျ့နှဈရာသီစံပယျ စသဖွငျ့ ခုနဈခု ခှဲခွားထားသညျ။
ပူအိုကျသောဒသေမြား၌သာ ဖွဈထှနျးသညျ။ အာရှတိုကျတောငျပိုငျးရှိ တိုငျးပွညျ မြား၌ အမြားဆုံးစိုကျပြိုးသညျ။ အိန်ဒိယနိုငျငံနှငျ့ ပါရှားတိုး၌ အမြားဆုံးစိုကျသညျ။ မွနျမာ ပွညျ အပူပိုငျးဒသေတှမှောလညျး စိုကျပြိုးကွသညျ။ ပူအိုကျစှတျစိုသော ရာသီကို ကွိုကျနှဈသကျပွီး ဆောငျးရာသီနှငျ့ နှရောသီတှငျ လှိုငျလှိုငျပှငျ့သညျ။
စံပယျပငျသညျ မွမေရှေး စိုကျပြိုးဖွဈထှနျးသညျ။ အကွမျးခံပငျဖွဈသညျ။ နုနျးဆနျသော မွတှေငျ အထူးရှငျသနျကောငျးမှနျပွီး လဝေငျလထှေကျကောငျး၍ ရမေဝပျသညျ့ မွေ၊ မွဆေီ မခံရှိသော မွမြေားတှငျပိုမို ဖွဈထှနျးသညျ။ စိုကျခငျး အကယျြကို ရလေောငျး ပေး မှု လှယျကူစရေနျ ရရှိသညျ့ မွကှေကျအလြား အပျေါ မူတညျ၍ ထားရသညျ။ အမြားအားဖွငျ့ ၂၀ ပေ × ၃ပေ အလြား အနံထား၍ စိုကျပြိုးကွသညျ။ စိုကျခငျးမွေ အား တဈပခေနျ့ ကငျြးနကျနကျတူး၍ လညျးကောငျး၊ တဈပခေနျ့ မွငျ့သော ဘောငျတငျ စိုကျခွငျးလညျးကောငျး တဈပခေနျ့ မွငျ့သော ဘောငျတငျစိုကျပြိုးခွငျးဖွငျ့ လညျးကောငျး ပွုလုပျစိုကျပြိုကွသညျ။ အပျေါယံမွသေား တဈဆ၊ သဈရှကျဆှေး၊ မွနှေဈဆ နှငျ့ သဲကွမျးတဈဆ ရောစပျထားသော မွမြေားအား ဘောငျအမွငျ့ တဈပေ တငျ၍ လညျးကောငျး တဈပနေကျကငျြးတှငျ ထညျ့၍လညျး ကောငျး ပွုလုပျပေးရသညျ။
တဈပငျနှငျ့ တဈပငျခှာ၍လညျးကောငျး တဈတနျးနှငျ့ တဈတနျး တဈပခှော၍ လညျးကောငျး စိုကျပြိုးသငျ့သညျ။ သို့မှသာ ပွုစုထိနျးသိမျးမှုနှငျ့ ကိုငျးဖွတျရ လှယျကူ မညျ။ ကိုငျးမြားအား အမွဈမပါဘဲ မွလေုံးပါနအေောငျ ရှပွေ့ောငျး စိုကျပြိုးသငျ့သညျ။ စိုကျပွီးစ၌ နရေောငျ အရိပျကပြါက ယာယီ အရိပျပွုလုပျပေးပွီး အရိပျကို တဖွညျးဖွညျး ရုပျသိမျးခွငျးလုပျပေးပါက ပို၍ သနျစှမျးသညျ။ ပနျးအိုးသို့ ပွောငျးရှစေို့ကျပါက အထကျပါအတိုငျး ရောစပျထားသော မွသေားမြားထညျ့ပွီး ပွောငျးရှစေို့ကျရသညျ။ စိုကျပွီးစအခြိနျတှငျ နှားခြေးမွသွေဇာမြား ကြှေးပေးရနျမလိုခြေ။
တဈဧကစိုကျရနျ မြိုးကိုငျး ၄၀၀၀၀ ခနျ့ လိုအပျသညျ။
မိုးဦး ဇှနျလ၊ ဇူလိုငျလ သညျ အကောငျးဆုံး စိုကျခြိနျဖွဈသညျ။ မွသွေဇာ ကြှေးခွငျးကို တဈနှဈလြှငျ နှဈကွိမျ ပွုလုပျပေးရသညျ။ မိုးဦး ဇှနျလ၊ ဇူလိုငျလတှငျ တဈကွိမျကြှေးပွီး မိုးနှောငျး စကျတငျဘာလနှငျ့ အောကျတိုဘာလတှငျ တဈကွိမျ ကြှေးပေးရသညျ။ မိုးဦးတှငျ ယူရီးယားတဈဆနှငျ့ တီစူပါ တဈဆ အရောအား တဈပငျ လြှငျ ရှဈအောငျစ ကြှေးပေးရသညျ။ မိုးနှောငျးတှငျ အပှငျ့မြား လှိုငျလှိုငျထှကျရနျ ယူရီးယားတဈဆနှငျ့ တီစူပါနှဈဆခနျ့ ရောစပျ၍ တဈပငျလြှငျ ရှဈအောငျစနှုနျး ကြှေးပါက အပငျမြား ပိုသနျပွီး ပနျးမြားလညျး ဖွိုငျဖွိုငျပှငျ့မညျ ဖွဈသညျ။ မွသွေဇာ ကြှေးရာတှငျ ပငျရငျးနား ကပျမကြှေးပဲ အပငျအရှယျအစားပျေါ မူတညျ၍ အပငျနှငျ့ တဈပမှေ တဈပခှေဲခှာ၍ ကြှေးရမညျ။
မွသွေဇာကြှေးခွငျးနှငျ့အတူ ပေါငျးသငျမွဆှေပေးရမညျ။ စံပယျသညျ ကိုငျးဖွတျ ခွငျးပွုလုပျပွီး ထှကျလာသညျ့ ကိုငျးသဈထိပျမှသာ အမြားအပွားပှငျ့ရာ ၎င်းငျးအား ဆောငျးဦးဝငျစအခြိနျတှငျ ကိုငျးမြား ဖွတျတောကျ ပွုပွငျပေးရသညျ။ ဤသို့ ကိုငျးဖွတျ ၍ မွသွေဇာကြှေးထားလြှငျ ပနျးပှငျ့မြားစှာ ဖွိုငျဖွိုငျပှငျ့လာမညျ ဖွဈသညျ။
နှရောသီ ပနျးပှငျ့ခြိနျ ရမှေနျမှနျလောငျးပေးခွငျးဖွငျ့ အပှငျ့မြားမြားပှငျ့သညျ။
စံပယျကို မြိုးပှားရာတှငျ -
၁။ အကိုငျးကို မွမွှေုပျ၍ ကူးခွငျး။
၂။ အပငျခွမှေပေါကျသော ပငျပှားကို အမွဈနှငျ့တကှ ခှဲ၍ စိုကျပြိုးခွငျး။
၃။ အကိုငျးဖွတျ၍ စိုကျခွငျး။
၎င်းငျးသုံးနညျးအနကျ အလှယျကူဆုံးနှငျ့ စီးပှားဖွဈ စိုကျပြိုးသူမြား အမြားဆုံး အသုံးပွုသညျ့နညျးမှာ ကိုငျးဖွတျစိုကျပြိုးနညျး ဖွဈသညျ။
စံပယျတဈပငျလြှငျ အပှငျ့တဈရာနှုနျးဖွငျ့ ထှကျပါက တဈဧကတှငျ အပငျလေးသောငျးနှုနျး စိုကျမညျဆိုပါလြှငျ အပှငျ့ပေါငျး သိနျးလေးဆယျ ထှကျမညျ ဖွဈပါသညျ။ ပထမနှဈ၌သာ သခြောပွုစုထိနျးသိမျးခမြား ကုနျကမြညျဖွဈပွီး ဒုတိယနှဈနှငျ့ တတိယနှဈမြားတှငျ ငှကေုနျကွေးကြ အနညျးငယျသာ ရှိတော့သညျ။ ဝငျငှကေောငျးသောကွောငျ့ စံပယျခွံမြားကို စိုကျပြိုးသငျ့ပါသညျ။
🌸🌸စီးပွားဖြစ် စံပယ်စိုက်ပျိုးနည်း 🌸🌸
ဘာကြောင့် စံပယ်စိုက်ပျိုးသင့်တာလဲ !
➤ စံပယ်ပန်းကို ရွှေစံပယ်၊ ကြက်ရုန်းကြီး၊ ကြက်ရုန်းကလေး၊ ဘိတ်ကြီး၊ ဘိတ်ကလေး၊ စံပယ်လည်ဆံ ၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီစံပယ် စသဖြင့် ခုနစ်ခု ခွဲခြားထားသည်။
ပူအိုက်သောဒေသများ၌သာ ဖြစ်ထွန်းသည်။ အာရှတိုက်တောင်ပိုင်းရှိ တိုင်းပြည် များ၌ အများဆုံးစိုက်ပျိုးသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ပါရှားတိုး၌ အများဆုံးစိုက်သည်။ မြန်မာ ပြည် အပူပိုင်းဒေသတွေမှာလည်း စိုက်ပျိုးကြသည်။ ပူအိုက်စွတ်စိုသော ရာသီကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး ဆောင်းရာသီနှင့် နွေရာသီတွင် လှိုင်လှိုင်ပွင့်သည်။
စံပယ်ပင်သည် မြေမရွေး စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ အကြမ်းခံပင်ဖြစ်သည်။ နုန်းဆန်သော မြေတွင် အထူးရှင်သန်ကောင်းမွန်ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်း၍ ရေမဝပ်သည့် မြေ၊ မြေဆီ မခံရှိသော မြေများတွင်ပိုမို ဖြစ်ထွန်းသည်။ စိုက်ခင်း အကျယ်ကို ရေလောင်း ပေး မှု လွယ်ကူစေရန် ရရှိသည့် မြေကွက်အလျား အပေါ် မူတည်၍ ထားရသည်။ အများအားဖြင့် ၂၀ ပေ × ၃ပေ အလျား အနံထား၍ စိုက်ပျိုးကြသည်။ စိုက်ခင်းမြေ အား တစ်ပေခန့် ကျင်းနက်နက်တူး၍ လည်းကောင်း၊ တစ်ပေခန့် မြင့်သော ဘောင်တင် စိုက်ခြင်းလည်းကောင်း တစ်ပေခန့် မြင့်သော ဘောင်တင်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း ပြုလုပ်စိုက်ပျိုကြသည်။ အပေါ်ယံမြေသား တစ်ဆ၊ သစ်ရွက်ဆွေး၊ မြေနှစ်ဆ နှင့် သဲကြမ်းတစ်ဆ ရောစပ်ထားသော မြေများအား ဘောင်အမြင့် တစ်ပေ တင်၍ လည်းကောင်း တစ်ပေနက်ကျင်းတွင် ထည့်၍လည်း ကောင်း ပြုလုပ်ပေးရသည်။
တစ်ပင်နှင့် တစ်ပင်ခွာ၍လည်းကောင်း တစ်တန်းနှင့် တစ်တန်း တစ်ပေခွာ၍ လည်းကောင်း စိုက်ပျိုးသင့်သည်။ သို့မှသာ ပြုစုထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ကိုင်းဖြတ်ရ လွယ်ကူ မည်။ ကိုင်းများအား အမြစ်မပါဘဲ မြေလုံးပါနေအောင် ရွှေ့ပြောင်း စိုက်ပျိုးသင့်သည်။ စိုက်ပြီးစ၌ နေရောင် အရိပ်ကျပါက ယာယီ အရိပ်ပြုလုပ်ပေးပြီး အရိပ်ကို တဖြည်းဖြည်း ရုပ်သိမ်းခြင်းလုပ်ပေးပါက ပို၍ သန်စွမ်းသည်။ ပန်းအိုးသို့ ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပါက အထက်ပါအတိုင်း ရောစပ်ထားသော မြေသားများထည့်ပြီး ပြောင်းရွှေ့စိုက်ရသည်။ စိုက်ပြီးစအချိန်တွင် နွားချေးမြေသြဇာများ ကျွေးပေးရန်မလိုချေ။
တစ်ဧကစိုက်ရန် မျိုးကိုင်း ၄၀၀၀၀ ခန့် လိုအပ်သည်။
မိုးဦး ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လ သည် အကောင်းဆုံး စိုက်ချိန်ဖြစ်သည်။ မြေသြဇာ ကျွေးခြင်းကို တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးရသည်။ မိုးဦး ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လတွင် တစ်ကြိမ်ကျွေးပြီး မိုးနှောင်း စက်တင်ဘာလနှင့် အောက်တိုဘာလတွင် တစ်ကြိမ် ကျွေးပေးရသည်။ မိုးဦးတွင် ယူရီးယားတစ်ဆနှင့် တီစူပါ တစ်ဆ အရောအား တစ်ပင် လျှင် ရှစ်အောင်စ ကျွေးပေးရသည်။ မိုးနှောင်းတွင် အပွင့်များ လှိုင်လှိုင်ထွက်ရန် ယူရီးယားတစ်ဆနှင့် တီစူပါနှစ်ဆခန့် ရောစပ်၍ တစ်ပင်လျှင် ရှစ်အောင်စနှုန်း ကျွေးပါက အပင်များ ပိုသန်ပြီး ပန်းများလည်း ဖြိုင်ဖြိုင်ပွင့်မည် ဖြစ်သည်။ မြေသြဇာ ကျွေးရာတွင် ပင်ရင်းနား ကပ်မကျွေးပဲ အပင်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ အပင်နှင့် တစ်ပေမှ တစ်ပေခွဲခွာ၍ ကျွေးရမည်။
မြေသြဇာကျွေးခြင်းနှင့်အတူ ပေါင်းသင်မြေဆွပေးရမည်။ စံပယ်သည် ကိုင်းဖြတ် ခြင်းပြုလုပ်ပြီး ထွက်လာသည့် ကိုင်းသစ်ထိပ်မှသာ အများအပြားပွင့်ရာ ၎င်းအား ဆောင်းဦးဝင်စအချိန်တွင် ကိုင်းများ ဖြတ်တောက် ပြုပြင်ပေးရသည်။ ဤသို့ ကိုင်းဖြတ် ၍ မြေသြဇာကျွေးထားလျှင် ပန်းပွင့်များစွာ ဖြိုင်ဖြိုင်ပွင့်လာမည် ဖြစ်သည်။
နွေရာသီ ပန်းပွင့်ချိန် ရေမှန်မှန်လောင်းပေးခြင်းဖြင့် အပွင့်များများပွင့်သည်။
စံပယ်ကို မျိုးပွားရာတွင် -
၁။ အကိုင်းကို မြေမြှုပ်၍ ကူးခြင်း။
၂။ အပင်ခြေမှပေါက်သော ပင်ပွားကို အမြစ်နှင့်တကွ ခွဲ၍ စိုက်ပျိုးခြင်း။
၃။ အကိုင်းဖြတ်၍ စိုက်ခြင်း။
၎င်းသုံးနည်းအနက် အလွယ်ကူဆုံးနှင့် စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးသူများ အများဆုံး အသုံးပြုသည့်နည်းမှာ ကိုင်းဖြတ်စိုက်ပျိုးနည်း ဖြစ်သည်။
စံပယ်တစ်ပင်လျှင် အပွင့်တစ်ရာနှုန်းဖြင့် ထွက်ပါက တစ်ဧကတွင် အပင်လေးသောင်းနှုန်း စိုက်မည်ဆိုပါလျှင် အပွင့်ပေါင်း သိန်းလေးဆယ် ထွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ပထမနှစ်၌သာ သေချာပြုစုထိန်းသိမ်းခများ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယနှစ်နှင့် တတိယနှစ်များတွင် ငွေကုန်ကြေးကျ အနည်းငယ်သာ ရှိတော့သည်။ ဝင်ငွေကောင်းသောကြောင့် စံပယ်ခြံများကို စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။
Posted by Alex Aung at 8:58 AM No comments:
"ပရျောဖကျရှငျနယျ ပီသတဲ့ အပွုအမူတှေ"
ကိုယျ ဘယျလိုလူလဲ ဆိုတာကို ပွသနတေဲ့ အခကျြတှထေဲမှာ ကိုယျ့ရဲ့ အပွုအမူတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။ ဒီအပျေါမှာ မူတညျပွီး တဈပါးသူတှရေဲ့ အထငျကွီး လေးစားမှုတှေ၊ ယုံကွညျမှုတှေ ရလာကွတယျ။ ဒီအတှကျ လုပျငနျးခှငျမှာ ကိုယျ့ကို ပရျောဖကျရှငျနယျ ပီသကွောငျး ထငျဟပျစတေဲ့ အပွုအမူတှကေို ရေးပွခငျြပါတယျ။
၁။ မိတျဆကျပေးခံရတဲ့အခါ မတျတပျထ နှုတျဆကျပါ။ (Stand up when being introduced)
ပှဲတှေ၊ အခမျးအနားတှေ သှားတဲ့အခါ တဈယောကျယောကျက ကိုယျ့ကို မိတျဆကျပေးတယျဆို ထိုငျမနပေါနဲ့။ မတျတပျထ နှုတျဆကျပေးပါ။
၂။ ကိုယျ့ဘကျက စနှုတျဆကျတတျပါစေ။ နှုတျဆကျနညျးလညျး မှနျပါစေ။ (Greetings)
သူက ချေါမှ ကိုယျပွနျနှုတျဆကျတာမြိုးထကျစာရငျ ကိုယျ့ဘကျက စနှုတျဆကျတတျတဲ့ အလအေ့ထက ကိုယျ့ကို လူခဈြလူခငျ မြားစမှောပါ။ နှုတျဆကျတဲ့အခါမှာလညျး ဝလာတယျနျော၊ ပိနျသှားတယျနျော၊ အသားတှေ မဲသှားတယျနျော၊ ဝကျခွံတှေ မြားနတေယျ၊ စတဲ့ တဈဖကျသားကို စိတျကသိကအောကျ ဖွဈစတေဲ့၊ တခြို့လူတှအေတှကျ စိတျဆိုးစရာ ဖွဈသှားနိုငျတဲ့ နှုတျဆကျမှုမြိုးတှေ မလုပျမိဖို့ သတိထားပါ။
၃။ ရှစေညျးကမျးကို လိုကျနာပါ။
တခွားတော့ မဟုတျပါဘူး။ ပွုံးရှငျဖျောရှစှော နတေတျခွငျး ဖွဈပါတယျ။ (Golden rule = Be Friendly) တခြို့လညျး ပငျကိုယျအရ မကျြနှာထား တညျတာတှေ ရှိပါတယျ။ အဲ့လိုတညျတိုငျးလညျး ပရို မပီသဘူးတော့ မဟုတျပါဘူး။ အမွဲတမျးခညျြး ပွုံးပြျောနရေမယျလညျး မဟုတျပွနျဘူး။ ကွညျလငျရှငျပနြတေဲ့ မကျြနှာထား၊ သှကျလကျတဲ့ ပုံစံ၊ ခဉျြးကပျလှယျတဲ့ အမူအရာမြိုး ဖွဈနမေယျဆိုရငျတော့ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
၄။ သငျ့တငျ့လြောကျပတျစှာ ဝတျစားဆငျယငျပါ။ (Dress appropriately)
အလုပျသဘာဝခငျြး မတူလို့ တခြို့လုပျငနျးခှငျမှာ ခှငျ့ပွုထားတဲ့ ဝတျစားဆငျယငျမှုမြိုးနဲ့ တခြို့မှာ ဝတျသငျ့တဲ့ ပုံစံမြိုး မတူပါဘူး။ တီရှပျ၊ စပို့ရှပျတှေ ဝတျရငျ အဆငျမပွတေဲ့ လုပျငနျးခှငျ ရှိတယျ။ အကြီအပွငျထုတျထားရငျ အဆငျမပွတေဲ့ လုပျငနျးခှငျ ရှိတယျ။ လှပနဖေို့၊ အကောငျးစားတှေ ဝတျထားဖို့ထကျ သပျရပျကြော့ရှငျးနဖေို့၊ အမွငျတငျ့တယျဖို့၊ သငျ့တငျ့လြောကျပတျစှာ ဝတျစားဆငျယငျတတျဖို့က ပိုအရေးကွီးပါတယျ။
၅။ အခြိနျတိကပြါစေ။ (Be punctual)
ဒါကလညျး ပရိုပီသခငျြသူတှအေတှကျ အရေးကွီးတဲ့ အခကျြတဈခကျြပါပဲ။ မမြှျောလငျ့တဲ့ အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ နောကျကတြာ ပွဿနာ မရှိပမေဲ့ အမွဲတမျးနီးပါး နောကျကနြတော၊ ပထမဆုံး တှတေဲ့ ခြိနျးဆိုမှုမှာ နောကျကတြာတှကေတော့ အဆငျမပွပေါဘူး။ တကယျဆို ခြိနျးထားတဲ့အခြိနျထကျ အနညျးဆုံး ၁၅ မိနဈ စောပွီး ရောကျနသေငျ့တာပါ။
၆။ စကားပွောဆိုတဲ့အခါ (Conversation etiquette)
Eye contact ရှိပါစေ။ သခြောနားထောငျပါ။ အာရုံစိုကျပါ။ ဖုနျးကို ငုံ့ကွညျ့နရေငျး၊ သုံးနရေငျး နားထောငျနတောမြိုး၊ စကားပွနျပွောတာမြိုး မလုပျပါနဲ့။ မတျောတဆ အရေးကွီးကိစ်စ ရှိလာရငျ ခှငျ့အရငျတောငျးပွီးမှ ဖုနျးသုံးပါ။
၇။ အတငျး မပွောပါနဲ့။ (Don’t gossip)
လူတဈယောကျရဲ့ မကောငျးကွောငျးကို သူ့နောကျကှယျမှာ ပွောလိုကျခွငျးက အပွောခံရသူ ပွနျမသိခငျ၊ သူ မနဈနာခငျ ကိုယျက အရငျဆုံး တဈခု ဆုံးရှုံးလိုကျရပါပွီ။ ပွောပွောခငျြးမှာကို ဆုံးရှုံးသှားတာပါ။ အဲဒါကတော့ နားထောငျသူရဲ့ ကိုယျ့အပျေါ ထားတဲ့ အထငျကွီး လေးစားမှု၊ ယုံကွညျမှု ဖွဈပါတယျ။
ဒါတှကေတော့ ပရျောဖကျရှငျနယျ မဆနျတဲ့ အပွုအမူတှထေဲက တခြို့ ဖွဈပါတယျ။ တခွား တခွားသော အပွုအမူတှလေညျး ရှိပါဦးမယျ။ ဒါတှကေို မလုပျမိအောငျ ရှောငျနိုငျလလေေ၊ ကိုယျ့အပျေါ တဈပါးသူရဲ့ အထငျအမွငျတှကေလညျး ပိုကောငျးလာလလေေ ဖွဈပွီးတော့ ပိုလညျး အောငျမွငျမှု ရလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
"ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပီသတဲ့ အပြုအမူတွေ"
ကိုယ် ဘယ်လိုလူလဲ ဆိုတာကို ပြသနေတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး တစ်ပါးသူတွေရဲ့ အထင်ကြီး လေးစားမှုတွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေ ရလာကြတယ်။ ဒီအတွက် လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ့်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပီသကြောင်း ထင်ဟပ်စေတဲ့ အပြုအမူတွေကို ရေးပြချင်ပါတယ်။
၁။ မိတ်ဆက်ပေးခံရတဲ့အခါ မတ်တပ်ထ နှုတ်ဆက်ပါ။ (Stand up when being introduced)
ပွဲတွေ၊ အခမ်းအနားတွေ သွားတဲ့အခါ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆို ထိုင်မနေပါနဲ့။ မတ်တပ်ထ နှုတ်ဆက်ပေးပါ။
၂။ ကိုယ့်ဘက်က စနှုတ်ဆက်တတ်ပါစေ။ နှုတ်ဆက်နည်းလည်း မှန်ပါစေ။ (Greetings)
သူက ခေါ်မှ ကိုယ်ပြန်နှုတ်ဆက်တာမျိုးထက်စာရင် ကိုယ့်ဘက်က စနှုတ်ဆက်တတ်တဲ့ အလေ့အထက ကိုယ့်ကို လူချစ်လူခင် များစေမှာပါ။ နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာလည်း ဝလာတယ်နော်၊ ပိန်သွားတယ်နော်၊ အသားတွေ မဲသွားတယ်နော်၊ ဝက်ခြံတွေ များနေတယ်၊ စတဲ့ တစ်ဖက်သားကို စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်စေတဲ့၊ တချို့လူတွေအတွက် စိတ်ဆိုးစရာ ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ နှုတ်ဆက်မှုမျိုးတွေ မလုပ်မိဖို့ သတိထားပါ။
၃။ ရွှေစည်းကမ်းကို လိုက်နာပါ။
တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြုံးရွှင်ဖော်ရွေစွာ နေတတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ (Golden rule = Be Friendly) တချို့လည်း ပင်ကိုယ်အရ မျက်နှာထား တည်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့လိုတည်တိုင်းလည်း ပရို မပီသဘူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အမြဲတမ်းချည်း ပြုံးပျော်နေရမယ်လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ကြည်လင်ရွှင်ပျနေတဲ့ မျက်နှာထား၊ သွက်လက်တဲ့ ပုံစံ၊ ချဉ်းကပ်လွယ်တဲ့ အမူအရာမျိုး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
၄။ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ ဝတ်စားဆင်ယင်ပါ။ (Dress appropriately)
အလုပ်သဘာဝချင်း မတူလို့ တချို့လုပ်ငန်းခွင်မှာ ခွင့်ပြုထားတဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမျိုးနဲ့ တချို့မှာ ဝတ်သင့်တဲ့ ပုံစံမျိုး မတူပါဘူး။ တီရှပ်၊ စပို့ရှပ်တွေ ဝတ်ရင် အဆင်မပြေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ရှိတယ်။ အကျီအပြင်ထုတ်ထားရင် အဆင်မပြေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ရှိတယ်။ လှပနေဖို့၊ အကောင်းစားတွေ ဝတ်ထားဖို့ထက် သပ်ရပ်ကျော့ရှင်းနေဖို့၊ အမြင်တင့်တယ်ဖို့၊ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ ဝတ်စားဆင်ယင်တတ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
၅။ အချိန်တိကျပါစေ။ (Be punctual)
ဒါကလည်း ပရိုပီသချင်သူတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါပဲ။ မမျှော်လင့်တဲ့ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် နောက်ကျတာ ပြဿနာ မရှိပေမဲ့ အမြဲတမ်းနီးပါး နောက်ကျနေတာ၊ ပထမဆုံး တွေ့တဲ့ ချိန်းဆိုမှုမှာ နောက်ကျတာတွေကတော့ အဆင်မပြေပါဘူး။ တကယ်ဆို ချိန်းထားတဲ့အချိန်ထက် အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ် စောပြီး ရောက်နေသင့်တာပါ။
၆။ စကားပြောဆိုတဲ့အခါ (Conversation etiquette)
Eye contact ရှိပါစေ။ သေချာနားထောင်ပါ။ အာရုံစိုက်ပါ။ ဖုန်းကို ငုံ့ကြည့်နေရင်း၊ သုံးနေရင်း နားထောင်နေတာမျိုး၊ စကားပြန်ပြောတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ မတော်တဆ အရေးကြီးကိစ္စ ရှိလာရင် ခွင့်အရင်တောင်းပြီးမှ ဖုန်းသုံးပါ။
၇။ အတင်း မပြောပါနဲ့။ (Don’t gossip)
လူတစ်ယောက်ရဲ့ မကောင်းကြောင်းကို သူ့နောက်ကွယ်မှာ ပြောလိုက်ခြင်းက အပြောခံရသူ ပြန်မသိခင်၊ သူ မနစ်နာခင် ကိုယ်က အရင်ဆုံး တစ်ခု ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါပြီ။ ပြောပြောချင်းမှာကို ဆုံးရှုံးသွားတာပါ။ အဲဒါကတော့ နားထောင်သူရဲ့ ကိုယ့်အပေါ် ထားတဲ့ အထင်ကြီး လေးစားမှု၊ ယုံကြည်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မဆန်တဲ့ အပြုအမူတွေထဲက တချို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား တခြားသော အပြုအမူတွေလည်း ရှိပါဦးမယ်။ ဒါတွေကို မလုပ်မိအောင် ရှောင်နိုင်လေလေ၊ ကိုယ့်အပေါ် တစ်ပါးသူရဲ့ အထင်အမြင်တွေကလည်း ပိုကောင်းလာလေလေ ဖြစ်ပြီးတော့ ပိုလည်း အောင်မြင်မှု ရလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 11:04 AM No comments:
စိုကျပြိုးတဲ့သီးနှံ အထှကျကောငျးဖို့အတှကျ အရညျအသှေးကောငျးတဲ့မွကေို လိုအပျပါတယျ။
မွကွေီးရဲ့အရညျအသှေးကိုအကဲဖွတျဖို့ မွကွေီးရဲ့ဂုဏျသတ်တိ​တှကေို လလေ့ာသိရှိထားသငျ့ပါတယျ။
#အျောဂငျးနဈပစ်စညျးတှေ (အပငျနဲ့တိရိစ်ဆာနျအကွှငျးအကနျြ၊စှနျ့ပဈပစ်စညျးတှေ) နဲ့ဖှဲ့စညျးထားတာပါ။
မွကွေီးဟာ အရှယျအစားမတူတဲ့သဲ၊နုနျး၊ရှံ့စေး စတဲ့မွမှေုနျတှကေိုအခြိုးအစားအမြိုးမြိုးနဲ့ပေါငျးစပျထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
သဲမွဟောမွမှေုနျအရှယျအစားအကွီးဆုံးပါ။​ မွမှေုနျ ရဲ့အခငျြးဟာ ၂.ဝကနေ ၀.၀၅မီလီမီတာ လောကျရှိပါမယျ။
သဲမွဟော ပေါ့မယျ။ နှေးမယျ ။ခွောကျသှမေ့ယျ။ အကျဆဈဆနျမယျ။ လုပျရကိုငျရတာလှယျကူပမေယျ့ ရေ နဲ့ အဟာရကိုတော့ထိနျးမထားနိုငျပါဘူး။
ရှံ့စေးမွဟော မွမှေုနျအရှယျအစားအသေးဆုံးဘဲ။မွမှေုနျရဲ့ အခငျြးဟာ ၀.၀၀၂မီလီမီတာ အောကျမှာရှိမယျ။ အစိုဓာတျထိနျးအားကောငျးမယျ။အဟာရ​ကောငျးမယျ။
ရှံစေးမွဟော လေးမယျ။အေးမယျ။ခွောကျသှရေ့ငျမာကွောသှားရော။စို​​နရေငျ စေးကပျတာကွောငျ့ ​လုပျရကိုငျရခကျခဲပါမယျ။
နုနျးမွဟော မွမှေုနျအရှယျအစား အလယျအလတျရှိတဲ့​မွပေါ ။ မွမှေုနျရဲ့အခငျြးဟာ ၀.၀၅ ကနေ ၀.၀၀၂မီလီမီတာ လောကျရှိမယျ။
နုနျးမွဟော ရှံစေးမွလေိုပဲ အစိုဓာတျထိနျးအားကောငျးပွီး အဟာရပွညျ့ဝမယျ။
မွေ​ကွပျလှယျပါမယျ။ မွကွေပျရငျမွကွေီးထဲလဝေငျလထှေကျမကောငျးတော့ဘူး။အပငျရဲ့အမွဈတှေ မွကွေီးထဲလှယျလှယျကူကူ မထိုးဖောကျနိုငျတော့ဘူး။မွကွေပျတဲ့အခါ မိုးရကေိုစုပျမထားနိုငျဘဲ စီးဆငျးသှားတဲ့အတှကျ မွဆေီလှာတိုကျစားတာ ဖွဈပျေါ နိုငျပါတယျ။
ဘယျမွအေမြိုးအစားမှာဖွဈဖွဈ မွကွေီးထဲကိုမွဆှေေးတှေ စဉျဆကျမပွတျထညျ့ပေးရငျ ကောငျးမှနျတဲ့မွဖွေဈလာနိုငျပါတယျ။
အပငျအားလုံးအတှကျ အကောငျးဆုံးအပွညျ့စုံဆုံးမွဆေိုတာမရှိပါဘူး။တခြို့အပငျတှဟော သဲမွမှောဖွဈထှနျးတယျ။တခြို့အပငျတှဟော ရှံ့စေးမွကေိုကွိုကျတယျ။သာမာနျ ဥယြာဉျသီးနှံပငျတှအေတှကျကတော့ ရောနှောမွေ အမြိုးအစား(သဲ ၄၀%+နုနျး ၄၀%+ရှံ့စေး ၂၀%+အျောဂငျးနဈပစ်စညျးမြား)ဟာ အသငျ့လြျောဆုံးပါ။
သဲ၊နုနျး၊ရှံ့စေး မွမှေုနျတှဟော အပငျတိရိစ်ဆာနျအကွှငျးအကနျြအဆှေးအမွတှေ့ေ၊ကယျလစီယမျတှနေဲ့ပေါငျးစုဖှဲ့စညျးပွီး ကွမှေလှယျတဲ့မွစောခဲ တှဖွေဈပျေါတယျ။ အဲဒီမွစောခဲတခုနဲ့တခုကွားမှာ နရောလှတျတှရှေိတယျ။
သဲမွမှော မွဆှေေး၊တိရိစ်ဆာနျအညဈအကွေးအဆှေးတှေ မွကွေီးထဲပုံမှနျထညျ့ပေးရပါမယျ။
အဲဒီမွမြေိုးကို pH7နဲ့ အထကျ(အယျကာလီအခွအေနေ)ဆိုရငျ ဂဈြပဆငျ(ကြောကျမှုနျ့)ထညျ့​ပေးပါ။
pH7အောကျ(အကျဆဈအခွအေနေ)ဆိုရငျ ထုံးထညျ့ပေးပါ။ရဝေပျတဲ့ရှံ့စေးမွကေို သဲထညျ့ပေးပါ။
ထှနျယကျတူးဆှတာ တတျနိုငျသမြှ အနညျးဆုံးလုပျပါ။
မွကွေီးထဲမှာ အဏုဇီဝပိုး၊ အကြိုးပွုသကျရှိတှေ (ဘကျတီးရီးယား၊မှို၊တီကောငျစသဖွငျ့)ရှငျသနျနနေိုငျဖို့ ဓာတုဆေးမြားဖွဈကွတဲ့မွသွေဇာ၊ပိုးသတျဆေး၊မှိုသတျဆေးတှကေို အလှနျအကြှံ မသုံးမိအောငျ သတိထားသငျ့ပါတယျ။
မွကွေီးမှာ အရောငျ​​အမြိုးမြိုး​ရှိပါတယျ ။ အျောဂငျးနဈပစ်စညျးနဲ့ အိုငျးယှနျးအောကျဆိုကျ (သံဓာတျ)ပါဝငျမှုအနညျးအမြား၊ လဝေငျလထှေကျကောငျးမကောငျးစတာတှကွေောငျ့မွကွေီးဟာအရောငျတှေ ကှဲသှားရတယျ။မွကွေီးရဲ့အရောငျကိုကွညျ့ပွီးတော့ မွရေဲ့ ယဘေူယအြခွအေနကေို သိနိုငျပါတယျ။
ခွောကျသှပေ့မေယျ့ ကိုငျလိုကျရငျ လကျမှာညဈပတျကနျြခဲ့ပွီး ဖုနျထူတဲ့မွမြေိုးတှဟော အျောဂငျးနဈပစ်စညျးမြားတဲ့မွပေါ။
#အနီရောငျနဲ့အညိုရောငျမွဟော ရစေီးရလောကောငျးတဲ့မွဖွေဈပါတယျ။ မွကွေီးထဲအောကျဆီဂငျြပေါမြားတော့ မွထေဲရှိတဲ့သံဓာတျတှဟော အောကျဆီဂငျြနဲ့ပေါငျးပွီးသံခြေးတကျမယျ။ဒီလိုနဲ့ မွကွေီးအရောငျဟာ သံခြေးရောငျ(နီ၊ညိုရောငျ)ဖွဈလာပါတယျ။
#မီးခိုးရောငျနဲ့မီးခိုးအပွာရောငျမွဟော ရဝေပျတဲ့မွမြေိုးဖွဈတယျ။သံနဲ့ မကျဂနီးဈ ဒွပျပေါငျး နညျးမယျ။ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့မွကွေီးထဲမှာအောကျဆီဂငျြနညျးပါးနလေို့ဖွဈပါတယျ။(ရဝေပျတဲ့မွမှောမွကွေီးထဲက အကြိုးပွုအဏုဇီဝပိုးတှဟော သူတို့လိုအပျတဲ့အောကျဆီဂငျြကို သံနဲ့မငျးဂနီးဈ အောကျဆိုကျဆီက ရယူလို့ပါ)
#မီးခိုးဖြော့ရောငျမွဟော အရောငျခြှတျခံရသလိုမြိုးပါ။ သံနဲ့မငျးဂနီးဈတှမေိုးရကွေောငျ့ စိမျ့ဝငျစီးမြော ဆုံးရှုံးသှားတာပါ။
ရှံစေးမွနေဲ့ အျောဂငျးနဈပစ်စညျးတှဟော အမဓာတျဆောငျပါတယျ။အပငျအဟာရတှဖွေဈကွတဲ့
ပိုတကျစီယမျ(k)နဲ့ အမိုနီယမျ တှဟော အဖိုဓာတျဆောငျပါတယျ။ မွကွေီးအမဓာတျတှကေဆှဲထားလို့ သူတို့ဟာ ရနေဲ့အတူ စိမျ့ဝငျစီးမြောဆုံရှုံးတာ သိပျမရှိဘူး။
နိုကျထရိုကျ(NO3)ကတော့ အမဓာတျဖွဈလို့ မွကွေီးထဲမှာ ရနေဲ့အတူစိမျ့ဝငျစီးမြော ဆုံးရှုံးတာမြားပါတယျ။
#မွဝေါက မွနေီလိုပဲ သံဒွဗျပေါငျးပါတယျ ။ မွဝေါမှာပါတဲ့
သံဒွ​ဗျပေါငျးဟာ ရပြေျောပုံစံဖွဈလို့ သံခြေးမတကျဘဲ ဝါနတောပါ။မွနေီလို ရထေုတျမကောငျးဘူး။ဖော့စဖရပျ(p)အသငျ့အတငျ့ရှိတယျ။မွကွေပျနိုငျ​တယျ။မွကွေီးကနေ
အပငျရေ ရယူနိုငျအားနညျးမယျ။ အဟာရအားနညျးနိုငျတယျ။ကျောဖီ၊လကျဖကျ၊သံပုရာစတဲ့အပငျတှအေတှကျသငျ့တျောတဲ့မွဖွေဈမယျ။ မွကွေီးအရောငျကိုကွညျ့ပွီး မွအေကွောငျးကိုယဘေူယဘြဲကောကျခကျြဆှဲနိုငျမှာပါ။
မွကွေီးရဲ့ အခဉျြအငံဓာတျကို pHတိုငျးကွညျ့ရငျသိနိုငျပါတယျ။ မွကွေီးနမူနာကိုစနဈတကယြူမယျ။ ဓာတျခှဲခနျးကိုပို့မယျ။ ပွနျရလာတဲ့အဖွဟော pHမီတာနဲ့တိုငျးတာထကျပိုတိကနြိုငျပါတယျ။
pHအနညျးအမြားဟာ မွကွေီးထဲက အဟာရတှကေို အပွောငျးအလဲဖွဈစနေိုငျတယျ။ဥပမာ- မွကွေီးရဲ့ pH 4.5 အောကျမှာဆိုရငျ အလူမီနီယမျနဲ့ မကျဂနီးဈတှဟော ပွငျးအားမွငျ့တကျလာပွီး အပငျတျောတျောမြားမြားကို အဆိပျသငျ့စနေိုငျပါတယျ။ အဲဒီမွမှော P,Ca,Mo တှခြေို့တဲ့နိုငျပါတယျ။
နိုကျထရိုဂငျြဓာတျမွသွေဇာအမြိုးမြိုးအပျေါ မွတှေငျးသကျရှိတှရေဲ့ တုံ့ပွနျမှုကွောငျ့ရယျ မွကွေီးထဲကသတ်တုဓာတျတှေ( ကယျလစီယမျ၊မကျဂနီစီယမျ၊ပိုတကျစီယမျ)စိမျ့ဝငျစီးမြောဆုံးရှုံးတာကွောငျ့ရယျ အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ မွကွေီးဟာ ခဉျြ(အကျဆဈအခွအေနဖွေဈ၊pHနိမျ့)လာတတျပါတယျ။
စိုကျခငျးအသေးတှေ၊အိမျပတျဝနျးကငျြဥယာဉျစိုကျပြိုးသူတှအေတှကျ မွငျသာအောငျပွောရမယျဆိုရငျ တပပေတျလညျလေးထောငျ့ကှကျမွပေမာဏကို ထုံး စားပှဲတငျဇှနျး လေးဇှနျးထညျ့ပေးပါ။ pH နှဈယူနဈ တကျနိုငျပါတယျ။(ဥပမာ-pH5 ကနေpH7တကျလာနိုငျပါတယျ။)
ထုံးကိုတခါတညျးအမြားကွီးမထညျ့သငျ့ပါဘူး။အပငျအဟာရ မညီမြှတာ ဖွဈလာတတျလို့ပါ။ pHကို တဖွညျးဖွညျးခငျြးမွငျ့တကျအောငျပွုလုပျတာဟာ အကောငျးဆုံးပါ။
အပငျမစိုကျပြိုးမှီ ခွောကျပတျမှရှဈပတျအထိ ကွိုတငျပွီးတော့ ထုံးကို မွကွေီးထဲ ရောနှောထညျ့သှငျးသငျ့ပါတယျ။နောကျပွီးတော့ ထုံးကို ဂဈြပဆငျနဲ့အတူတူ ရောနှောပွီး မွကွေီးထဲမထညျ့သငျ့ပါဘူး။ ထုံးရဲ့ ဆောငျရှကျခကျြတှကေို နှောငျ့နှေးပိတျဆို့စနေိုငျလို့ပါ။
(မှတျခကျြ။ဂဈြပဆငျထညျ့သှငျးတာဟာ မွကွေီးဖှဲ့စညျးပုံကိုကောငျးစတေတျပွီး pHမွငျ့တကျလာဖို့မရှိပါ)
မွကွေီးထဲမှာ [အာခီယာ(archaea), ဘကျတီးရီးယား(bacteria), အကျတီနိုမိုငျဆိ(actinomycetes), မှို (fungi),ရညှေိ(algae), protozoa, နှငျး​လှေး (springtails), မှား mites, နိမတုတျ(nematodes), တီကောငျ၊ပုရှကျဆိတျ၊အငျးဆကျ၊ မွတှေငျးတူးသတ်တဝါငယျမြားစတဲ့ သကျရှိတှေ ​နထေိုငျရှငျသနျကွပါတယျ။
(မွကွေီးထဲကအကြိုးပွုသကျရှိတှဟော အပငျနဲ့တိရိစ်ဆာနျအကွှငျးအကနျြကိုဖွိုခှဲပွီးတော့ သူတို့အတှကျ စှမျးအငျနဲ့အဟာရကိုရယူတယျ။အဲဒီလိုဖွိုခှဲစဉျမှာအပငျကအသုံးပွုတဲ့ အောကျဆီဂငျြနဲ့ အပငျအဟာရတှကေိုထုတျပေးတယျ။ သူတို့သတေဲ့အခါကတြော့လညျးဆှေးမွပွေီ့း အပငျအဟာရဖွဈကွပွနျတယျ။ဒီလိုနညျးနဲ့ အဟာရကောငျးမှနျတဲ့မွကွေီးကိုဖွဈပျေါစပေါတယျ။)
ဥပမာ-မွတှေငျးဘကျတီးရီးယားဖွဈတဲ့Bacillus thuringiensis(Bt) သီးနှံဖကျြပိုးမြားဖွဈတဲ့ ပေါကျဖတျ (caterpillar)၊ ပိုးတောငျမာ (beetles) နဲ့ ယငျ (flies)တှကေို နှိမျနှငျးနိုငျပါတယျ။
ထရိုငျကိုဒါးမား (Trichoderma) မှိုဟာဆိုရငျလညျး ဇီဝပိုးသတျဆေးဖွဈပါတယျ။ မှိုကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အပငျအမွဈရောဂါတှနေဲ့ နိမတုတျ(nematode)တှကေိုနှိမျနှငျးနိုငျပါတယျ။
ဟူးမတျဈဆိုတာ မွကွေီးထဲက ညိုမဲနတေဲ့ ဂယျြလီလို အျောဂငျးနဈပစ်စညျးဖွဈပါတယျ။ အကြိုးပွုအဏုဇီဝပိုးတှကွေောငျ့ အပငျနဲ့တိရိစ်ဆာနျအကွှငျးအကနျြတှေ ဆှေးမွသှေ့ားတဲ့​ဖွဈစဉျနောကျဆုံးမှာ ​ဟူးမတျဈကိုရပါတယျ။
အခြုပျအားဖွငျ့ မွကွေီးရဲ့ရုပျပိုငျး၊ဓာတုပိုငျး၊ဇီဝပိုငျးဆိုငျရာဂုဏျသတ်တိတှကေို သိရှိနားလညျပွီး
မွကွေီးကိုစနဈတကစြီမံခနျ့ခှဲတတျမယျဆိုရငျ မွကွေီးရဲ့အရညျအသှေးဟာ ကောငျးမှနျလာနိုငျမယျ။ သီးနှံအတှကျကုနျကစြရိတျတှသေကျသာလာမယျ။သဘာဝပတျဝနျးကငျြညဈညမျးမှုတှကေို ကာကှယျနိုငျမယျ။နောကျဆုံး စိုကျပြိုးတဲ့သီးနှံအထှကျနုနျး​တိုးတကျပွီး သီးနှံရဲ့အရညျအသှေးဟာလညျးပိုမိုကောငျးမှနျလာမယျ ဖွဈပါတယျ။ ။
စိုက်ပျိုးတဲ့သီးနှံ အထွက်ကောင်းဖို့အတွက် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့မြေကို လိုအပ်ပါတယ်။
မြေကြီးရဲ့အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ဖို့ မြေကြီးရဲ့ဂုဏ်သတ္တိ​တွေကို လေ့လာသိရှိထားသင့်ပါတယ်။
#အော်ဂင်းနစ်ပစ္စည်းတွေ (အပင်နဲ့တိရိစ္ဆာန်အကြွင်းအကျန်၊စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေ) နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။
မြေကြီးဟာ အရွယ်အစားမတူတဲ့သဲ၊နုန်း၊ရွံ့စေး စတဲ့မြေမှုန်တွေကိုအချိုးအစားအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သဲမြေဟာမြေမှုန်အရွယ်အစားအကြီးဆုံးပါ။​ မြေမှုန် ရဲ့အချင်းဟာ ၂.၀ကနေ ၀.၀၅မီလီမီတာ လောက်ရှိပါမယ်။
သဲမြေဟာ ပေါ့မယ်။ နွေးမယ် ။ခြောက်သွေ့မယ်။ အက်ဆစ်ဆန်မယ်။ လုပ်ရကိုင်ရတာလွယ်ကူပေမယ့် ရေ နဲ့ အဟာရကိုတော့ထိန်းမထားနိုင်ပါဘူး။
ရွံ့စေးမြေဟာ မြေမှုန်အရွယ်အစားအသေးဆုံးဘဲ။မြေမှုန်ရဲ့ အချင်းဟာ ၀.၀၀၂မီလီမီတာ အောက်မှာရှိမယ်။ အစိုဓာတ်ထိန်းအားကောင်းမယ်။အဟာရ​ကောင်းမယ်။
ရွံစေးမြေဟာ လေးမယ်။အေးမယ်။ခြောက်သွေ့ရင်မာကြောသွားရော။စို​​နေရင် စေးကပ်တာကြောင့် ​လုပ်ရကိုင်ရခက်ခဲပါမယ်။
နုန်းမြေဟာ မြေမှုန်အရွယ်အစား အလယ်အလတ်ရှိတဲ့​မြေပါ ။ မြေမှုန်ရဲ့အချင်းဟာ ၀.၀၅ ကနေ ၀.၀၀၂မီလီမီတာ လောက်ရှိမယ်။
နုန်းမြေဟာ ရွံစေးမြေလိုပဲ အစိုဓာတ်ထိန်းအားကောင်းပြီး အဟာရပြည့်ဝမယ်။
မြေ​ကြပ်လွယ်ပါမယ်။ မြေကြပ်ရင်မြေကြီးထဲလေဝင်လေထွက်မကောင်းတော့ဘူး။အပင်ရဲ့အမြစ်တွေ မြေကြီးထဲလွယ်လွယ်ကူကူ မထိုးဖောက်နိုင်တော့ဘူး။မြေကြပ်တဲ့အခါ မိုးရေကိုစုပ်မထားနိုင်ဘဲ စီးဆင်းသွားတဲ့အတွက် မြေဆီလွှာတိုက်စားတာ ဖြစ်ပေါ် နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်မြေအမျိုးအစားမှာဖြစ်ဖြစ် မြေကြီးထဲကိုမြေဆွေးတွေ စဉ်ဆက်မပြတ်ထည့်ပေးရင် ကောင်းမွန်တဲ့မြေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အပင်အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးအပြည့်စုံဆုံးမြေဆိုတာမရှိပါဘူး။တချို့အပင်တွေဟာ သဲမြေမှာဖြစ်ထွန်းတယ်။တချို့အပင်တွေဟာ ရွံ့စေးမြေကိုကြိုက်တယ်။သာမာန် ဥယျာဉ်သီးနှံပင်တွေအတွက်ကတော့ ရောနှောမြေ အမျိုးအစား(သဲ ၄၀%+နုန်း ၄၀%+ရွံ့စေး ၂၀%+အော်ဂင်းနစ်ပစ္စည်းများ)ဟာ အသင့်လျော်ဆုံးပါ။
သဲ၊နုန်း၊ရွံ့စေး မြေမှုန်တွေဟာ အပင်တိရိစ္ဆာန်အကြွင်းအကျန်အဆွေးအမြေ့တွေ၊ကယ်လစီယမ်တွေနဲ့ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းပြီး ကြေမွလွယ်တဲ့မြေစာခဲ တွေဖြစ်ပေါ်တယ်။ အဲဒီမြေစာခဲတခုနဲ့တခုကြားမှာ နေရာလွတ်တွေရှိတယ်။
သဲမြေမှာ မြေဆွေး၊တိရိစ္ဆာန်အညစ်အကြေးအဆွေးတွေ မြေကြီးထဲပုံမှန်ထည့်ပေးရပါမယ်။
အဲဒီမြေမျိုးကို pH7နဲ့ အထက်(အယ်ကာလီအခြေအနေ)ဆိုရင် ဂျစ်ပဆင်(ကျောက်မှုန့်)ထည့်​ပေးပါ။
pH7အောက်(အက်ဆစ်အခြေအနေ)ဆိုရင် ထုံးထည့်ပေးပါ။ရေဝပ်တဲ့ရွံ့စေးမြေကို သဲထည့်ပေးပါ။
ထွန်ယက်တူးဆွတာ တတ်နိုင်သမျှ အနည်းဆုံးလုပ်ပါ။
မြေကြီးထဲမှာ အဏုဇီဝပိုး၊ အကျိုးပြုသက်ရှိတွေ (ဘက်တီးရီးယား၊မှို၊တီကောင်စသဖြင့်)ရှင်သန်နေနိုင်ဖို့ ဓာတုဆေးများဖြစ်ကြတဲ့မြေသြဇာ၊ပိုးသတ်ဆေး၊မှိုသတ်ဆေးတွေကို အလွန်အကျွံ မသုံးမိအောင် သတိထားသင့်ပါတယ်။
မြေကြီးမှာ အရောင်​​အမျိုးမျိုး​ရှိပါတယ် ။ အော်ဂင်းနစ်ပစ္စည်းနဲ့ အိုင်းယွန်းအောက်ဆိုက် (သံဓာတ်)ပါဝင်မှုအနည်းအများ၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမကောင်းစတာတွေကြောင့်မြေကြီးဟာအရောင်တွေ ကွဲသွားရတယ်။မြေကြီးရဲ့အရောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ မြေရဲ့ ယေဘူယျအခြေအနေကို သိနိုင်ပါတယ်။
ခြောက်သွေ့ပေမယ့် ကိုင်လိုက်ရင် လက်မှာညစ်ပတ်ကျန်ခဲ့ပြီး ဖုန်ထူတဲ့မြေမျိုးတွေဟာ အော်ဂင်းနစ်ပစ္စည်းများတဲ့မြေပါ။
#အနီရောင်နဲ့အညိုရောင်မြေဟာ ရေစီးရေလာကောင်းတဲ့မြေဖြစ်ပါတယ်။ မြေကြီးထဲအောက်ဆီဂျင်ပေါများတော့ မြေထဲရှိတဲ့သံဓာတ်တွေဟာ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပေါင်းပြီးသံချေးတက်မယ်။ဒီလိုနဲ့ မြေကြီးအရောင်ဟာ သံချေးရောင်(နီ၊ညိုရောင်)ဖြစ်လာပါတယ်။
#မီးခိုးရောင်နဲ့မီးခိုးအပြာရောင်မြေဟာ ရေဝပ်တဲ့မြေမျိုးဖြစ်တယ်။သံနဲ့ မက်ဂနီးစ် ဒြပ်ပေါင်း နည်းမယ်။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့မြေကြီးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်နည်းပါးနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။(ရေဝပ်တဲ့မြေမှာမြေကြီးထဲက အကျိုးပြုအဏုဇီဝပိုးတွေဟာ သူတို့လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကို သံနဲ့မင်းဂနီးစ် အောက်ဆိုက်ဆီက ရယူလို့ပါ)
#မီးခိုးဖျော့ရောင်မြေဟာ အရောင်ချွတ်ခံရသလိုမျိုးပါ။ သံနဲ့မင်းဂနီးစ်တွေမိုးရေကြောင့် စိမ့်ဝင်စီးမျော ဆုံးရှုံးသွားတာပါ။
ရွံစေးမြေနဲ့ အော်ဂင်းနစ်ပစ္စည်းတွေဟာ အမဓာတ်ဆောင်ပါတယ်။အပင်အဟာရတွေဖြစ်ကြတဲ့
ပိုတက်စီယမ်(k)နဲ့ အမိုနီယမ် တွေဟာ အဖိုဓာတ်ဆောင်ပါတယ်။ မြေကြီးအမဓာတ်တွေကဆွဲထားလို့ သူတို့ဟာ ရေနဲ့အတူ စိမ့်ဝင်စီးမျောဆုံရှုံးတာ သိပ်မရှိဘူး။
နိုက်ထရိုက်(NO3)ကတော့ အမဓာတ်ဖြစ်လို့ မြေကြီးထဲမှာ ရေနဲ့အတူစိမ့်ဝင်စီးမျော ဆုံးရှုံးတာများပါတယ်။
#မြေဝါက မြေနီလိုပဲ သံဒြဗ်ပေါင်းပါတယ် ။ မြေဝါမှာပါတဲ့
သံဒြ​ဗ်ပေါင်းဟာ ရေပျော်ပုံစံဖြစ်လို့ သံချေးမတက်ဘဲ ဝါနေတာပါ။မြေနီလို ရေထုတ်မကောင်းဘူး။ဖော့စဖရပ်(p)အသင့်အတင့်ရှိတယ်။မြေကြပ်နိုင်​တယ်။မြေကြီးကနေ
အပင်ရေ ရယူနိုင်အားနည်းမယ်။ အဟာရအားနည်းနိုင်တယ်။ကော်ဖီ၊လက်ဖက်၊သံပုရာစတဲ့အပင်တွေအတွက်သင့်တော်တဲ့မြေဖြစ်မယ်။ မြေကြီးအရောင်ကိုကြည့်ပြီး မြေအကြောင်းကိုယေဘူယျဘဲကောက်ချက်ဆွဲနိုင်မှာပါ။
မြေကြီးရဲ့ အချဉ်အငံဓာတ်ကို pHတိုင်းကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ မြေကြီးနမူနာကိုစနစ်တကျယူမယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းကိုပို့မယ်။ ပြန်ရလာတဲ့အဖြေဟာ pHမီတာနဲ့တိုင်းတာထက်ပိုတိကျနိုင်ပါတယ်။
pHအနည်းအများဟာ မြေကြီးထဲက အဟာရတွေကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဥပမာ- မြေကြီးရဲ့ pH 4.5 အောက်မှာဆိုရင် အလူမီနီယမ်နဲ့ မက်ဂနီးစ်တွေဟာ ပြင်းအားမြင့်တက်လာပြီး အပင်တော်တော်များများကို အဆိပ်သင့်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမြေမှာ P,Ca,Mo တွေချို့တဲ့နိုင်ပါတယ်။
နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေသြဇာအမျိုးမျိုးအပေါ် မြေတွင်းသက်ရှိတွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ရယ် မြေကြီးထဲကသတ္တုဓာတ်တွေ( ကယ်လစီယမ်၊မက်ဂနီစီယမ်၊ပိုတက်စီယမ်)စိမ့်ဝင်စီးမျောဆုံးရှုံးတာကြောင့်ရယ် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ မြေကြီးဟာ ချဉ်(အက်ဆစ်အခြေအနေဖြစ်၊pHနိမ့်)လာတတ်ပါတယ်။
စိုက်ခင်းအသေးတွေ၊အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ဥယာဉ်စိုက်ပျိုးသူတွေအတွက် မြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် တပေပတ်လည်လေးထောင့်ကွက်မြေပမာဏကို ထုံး စားပွဲတင်ဇွန်း လေးဇွန်းထည့်ပေးပါ။ pH နှစ်ယူနစ် တက်နိုင်ပါတယ်။(ဥပမာ-pH5 ကနေpH7တက်လာနိုင်ပါတယ်။)
ထုံးကိုတခါတည်းအများကြီးမထည့်သင့်ပါဘူး။အပင်အဟာရ မညီမျှတာ ဖြစ်လာတတ်လို့ပါ။ pHကို တဖြည်းဖြည်းချင်းမြင့်တက်အောင်ပြုလုပ်တာဟာ အကောင်းဆုံးပါ။
အပင်မစိုက်ပျိုးမှီ ခြောက်ပတ်မှရှစ်ပတ်အထိ ကြိုတင်ပြီးတော့ ထုံးကို မြေကြီးထဲ ရောနှောထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ ထုံးကို ဂျစ်ပဆင်နဲ့အတူတူ ရောနှောပြီး မြေကြီးထဲမထည့်သင့်ပါဘူး။ ထုံးရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို နှောင့်နှေးပိတ်ဆို့စေနိုင်လို့ပါ။
(မှတ်ချက်။ဂျစ်ပဆင်ထည့်သွင်းတာဟာ မြေကြီးဖွဲ့စည်းပုံကိုကောင်းစေတတ်ပြီး pHမြင့်တက်လာဖို့မရှိပါ)
မြေကြီးထဲမှာ [အာခီယာ(archaea), ဘက်တီးရီးယား(bacteria), အက်တီနိုမိုင်ဆိ(actinomycetes), မှို (fungi),ရေညှိ(algae), protozoa, နှင်း​လှေး (springtails), မွှား mites, နိမတုတ်(nematodes), တီကောင်၊ပုရွက်ဆိတ်၊အင်းဆက်၊ မြေတွင်းတူးသတ္တဝါငယ်များစတဲ့ သက်ရှိတွေ ​နေထိုင်ရှင်သန်ကြပါတယ်။
(မြေကြီးထဲကအကျိုးပြုသက်ရှိတွေဟာ အပင်နဲ့တိရိစ္ဆာန်အကြွင်းအကျန်ကိုဖြိုခွဲပြီးတော့ သူတို့အတွက် စွမ်းအင်နဲ့အဟာရကိုရယူတယ်။အဲဒီလိုဖြိုခွဲစဉ်မှာအပင်ကအသုံးပြုတဲ့ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ အပင်အဟာရတွေကိုထုတ်ပေးတယ်။ သူတို့သေတဲ့အခါကျတော့လည်းဆွေးမြေ့ပြီး အပင်အဟာရဖြစ်ကြပြန်တယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့ အဟာရကောင်းမွန်တဲ့မြေကြီးကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။)
ဥပမာ-မြေတွင်းဘက်တီးရီးယားဖြစ်တဲ့Bacillus thuringiensis(Bt) သီးနှံဖျက်ပိုးများဖြစ်တဲ့ ပေါက်ဖတ် (caterpillar)၊ ပိုးတောင်မာ (beetles) နဲ့ ယင် (flies)တွေကို နှိမ်နှင်းနိုင်ပါတယ်။
ထရိုင်ကိုဒါးမား (Trichoderma) မှိုဟာဆိုရင်လည်း ဇီဝပိုးသတ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ မှိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အပင်အမြစ်ရောဂါတွေနဲ့ နိမတုတ်(nematode)တွေကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ပါတယ်။
ဟူးမတ်စ်ဆိုတာ မြေကြီးထဲက ညိုမဲနေတဲ့ ဂျယ်လီလို အော်ဂင်းနစ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးပြုအဏုဇီဝပိုးတွေကြောင့် အပင်နဲ့တိရိစ္ဆာန်အကြွင်းအကျန်တွေ ဆွေးမြေ့သွားတဲ့​ဖြစ်စဉ်နောက်ဆုံးမှာ ​ဟူးမတ်စ်ကိုရပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် မြေကြီးရဲ့ရုပ်ပိုင်း၊ဓာတုပိုင်း၊ဇီဝပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိတွေကို သိရှိနားလည်ပြီး
မြေကြီးကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲတတ်မယ်ဆိုရင် မြေကြီးရဲ့အရည်အသွေးဟာ ကောင်းမွန်လာနိုင်မယ်။ သီးနှံအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေသက်သာလာမယ်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုတွေကို ကာကွယ်နိုင်မယ်။နောက်ဆုံး စိုက်ပျိုးတဲ့သီးနှံအထွက်နုန်း​တိုးတက်ပြီး သီးနှံရဲ့အရည်အသွေးဟာလည်းပိုမိုကောင်းမွန်လာမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ။
Posted by Alex Aung at 9:43 AM No comments:
ရှီးပဒီး (Cordycpes) မှတျစု (အပိုငျး တဈ)
ရှီးပဒီးသညျ အပငျနှငျ့ သတ်တဝါ (၂) မြိုးပေါငျးစပျထားသောသဘာဝဆေးဖကျဝငျ ပစ်စညျးတဈခု ဖွဈပါသညျ။ Cordycpes ဟု သိပ်ပံနညျးကြ ချေါကွပွီး အင်ျဂလိပျအမညျမှာ Caterpillar fungus ဖွဈပါသညျ။ မွနျမာပွညျရှိ ဒသေအလိုကျ ချေါဆိုသောအမညျမြားမှာ ရှီးပဒီး၊ ပိုးဆေးနှယျရှငျ၊ ဆောငျးပိုး‌နှမွေကျ တို့ဖွဈသညျ။
ရှီးပဒီးသညျ ပတေဈသောငျးကြျောရှိသညျ့ ရခေဲတောငျမြား၌သာ ရှငျသနျပေါကျပှားနိုငျပါသညျ။ ကမ်ဘာပျေါတှငျ ယငျးတို့ အမြားဆုံးရှငျသနျသညျ့ဒသေမှာ တိဘကျကုနျးမွငျ့ဒသေနှငျ့ ဟိမဝန်တာ ရခေဲတောငျတနျးဒသေမြားဖွဈသညျ။ ယငျးဒသေမြားမှာ တိဘကျ၊ နီပေါနိုငျငံမွောကျပိုငျး၊ ဘူတနျနိုငျငံ၊ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ အနောကျတောငျဒသေနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံမွောကျပိုငျး ကခငျြပွညျနယျ ရခေဲတောငျဒသေတို့တှငျသာ တှရေ့ပါသညျ။ ကနျြကမ်ဘာ့နိုငျငံမြားတှငျ ရခေဲတောငျမြားရှိသျောလညျး ရှီးပဒီးကို မတှရေ့ပါ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ပူတာအိုမွို့၏ မွောကျဘကျ ရခေဲတောငျရှိရာအရပျမြားတှငျသာ သဘာဝအလြောကျ တှရေ့လရှေိ့သညျ။
ယငျးတို့ရှငျသနျပေါကျပှားရနျ ရခေဲမှတျအောကျအေးနရေနျ လိုအပျခွငျး၊ အောကျဆီဂငျြလြော့နညျးသော ပတျဝနျးကငျြတှငျသာ နနေိုငျခွငျးတို့ကွောငျ့ တျောရုံနရောတှငျ မပေါကျပှားနိုငျ၍ ရှားပါးအဖိုးတနျရခွငျးဖွဈသညျ။
လှနျခဲ့သော နှဈထောငျပေါငျးမြားစှာကပငျ ရှီးပဒီးကို တရုတျရိုးရာတိုငျးရငျးဆေးပညာ၌ အသုံးပွုခဲ့သညျဟု ယူဆခဲ့ကွသညျ။ သို့ရာတှငျ အစောဆုံး စာပအေထောကျအထားအနနှေငျ့ ၁၇၅၇ ခုနှဈ ခငျြမငျးဆကျ (Qing Dynasty) လကျထကျမှသာ စတငျဖျောပွထားသညျကို တှရှေိ့ရပါသညျ။ ထိုအခြိနျကာလက ရေးသားထုတျဝခေဲ့သော Ben-Cao-Cong-Xin (New Compilation of Materia Medica) စာအုပျတှငျ ရှီးပဒီးသညျ ရောဂါအမြားစုကို ပြောကျကငျးစနေိုငျသညျ့ အလှနျရှားပါးပွီး တနျဖိုးကွီးမွငျ့သော သဘာဝဆေးစှမျးကောငျးတဈလကျဖွဈကွောငျး ဖျောပွထားပါသညျ။ ယငျး၏ ရှားပါးခွငျး၊ တနျဖိုးကွီးမွငျ့ခွငျးနှငျ့ အစှမျးအာနိသငျ ထကျမွကျခွငျးတို့ကွောငျ့ ဧကရာဇျဘုရငျကိုသာ ကုသပေးရနျအတှကျ သီးခွားထားရှိခဲ့ကွောငျးကို ရေးသားဖျောပွထားပါသညျ။
ယငျးသို့ကုသရာတှငျ ကြောကျကပျရောဂါအမြိုးမြိုး၊ အဆုတျရောဂါအမြိုးမြိုး၊ နှလုံးအားနညျးခွငျး၊ အသညျးရောဂါနှငျ့ အဆီမြားသောရောဂါမြားအတှကျ အဓိကအသုံးပွုခဲ့ကွသညျ။ ထူးခွားမှုအနနှေငျ့ လိငျစိတျတကျကွှစရေနျ လှုံ့ဆျောရာတှငျလညျးကောငျး၊ သားသမီးမရသူမြား သန်ဓအေောငျစရေနျလညျးကောငျး အသုံးပွုရာ၌ ထိရောကျမှုရှိကွောငျး မှတျတမျးမြားအရ သိရပါသညျ။ ရှေးခတျေကပငျရှိခဲ့သညျ့ အလုံးအကြိတျ ကငျဆာအမြိုးမြိုးကိုပါ သကျသာပြောကျကငျးစကွေောငျးလညျး သိရပါသညျ။
ရှီးပဒီးသညျ ရောဂါအမြားစုကို သကျသာပြောကျကငျးစရေနျ ကုသရာတှငျ အသုံးပွုနိုငျသညျ့အပွငျ ကနျြးမာရေးပုံမှနျကောငျးမှနျစရေနျအတှကျ ဖွညျ့စှကျအာဟာရအဖွဈလညျး သုံးစှဲနိုငျပါသညျ။ ထိုကဲ့သို့သုံးစှဲခွငျးဖွငျ့ ကိုယျခံအားစနဈကောငျးမှနျစခွေငျး၊ မောပနျးမှုကို ပွပြေောကျစခွေငျးနှငျ့ သကျလုံကောငျးစခွေငျးစသညျ့ ကောငျးကြိုးမြားစှာ ရရှိစပေါသညျ။
ရှီးပဒီးကို ဖွညျ့စှကျအာဟာရအဖွဈ အသုံးပွုရာတှငျ ရနှေေးကွမျးသောကျသကဲ့သို့ ရနှေေးပူပူထဲ၌ စိမျ၍သောကျခွငျးဖွငျ့ ထူးခွားသော ဆေးဖကျဝငျအာနိသငျမြားကို ရရှိစပေါသညျ။ ရှီးပဒီး လကျဖကျရညျကွမျးကို တရုတျပွညျ၊ တိဘကျနှငျ့ ဘူတနျနိုငျငံတို့တှငျ အထူးဧညျ့သညျမြားကို ကွိုဆိုသညျ့အနနှေငျ့ အသုံးပွုလရှေိ့သညျ။
ရှီးပဒီးသညျ လူစား၍ရသော မှိုတဈမြိုးဖွဈသောကွောငျ့ ဒသေခံမြားက ဟငျးလြာအဖွဈလညျး (Culinary uses) ခကျြပွုတျစားသောကျလရှေိ့သညျကို တှရှေိ့ရပါသညျ။ အထူးသဖွငျ့ ကွကျသား၊ ဘဲသား၊ ဝကျသား၊ ပုစှနျတို့နှငျ့ ခကျြပွုတျပါက လှနျစှာအရသာရှိကွောငျး သိရပါသညျ။ ထူးကဲသောအရသာရှိသညျ့အပွငျ ကနျြးမာရေးကို အထောကျအကူပွုသညျဟု ယုံကွညျကွသဖွငျ့ ဈေးကွီးပေးပွီး ဝယျယူစားသုံးလရှေိ့ပါသညျ။
တရုတျရိုးရာတိုငျးရငျးဆေး (Traditional Chinese Medicine) စာအုပျမြားတှငျ ဖျောပွခကျြအရ ရှီးပဒီးသညျ နာတာရှညျကြောကျကပျရောဂါ အမြိုးမြိုးကိုလညျး ကာကှယျကုသနိုငျကွောငျး သိရှိရပါသညျ။ နာတာရှညျကြောကျကပျရောဂါမြားမှာ-
💥 နာတာရှညျကြောကျကပျပကျြစီးခွငျး (Chronic renal failure/CRF)
💥 နာတာရှညျကြောကျကပျရောငျရမျးခွငျးရောဂါမြား (Chronic glomerulonephritis)
💥 ကြောကျကပျပကျြစီးမှုကွောငျ့ သှေးအတှငျးပရိုတငျးဓာတျမြား လြော့နညျးလာခွငျး၊ ခန်ဓာကိုယျဖောရောငျခွငျး စသညျ့လက်ခဏာမြား (Nephrotic syndrome) ဖွဈသညျ။
ကြောကျကပျပကျြစီးမှုကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျနာကငျြကိုကျခဲခွငျး၊ ဖောရောငျခွငျး၊ မောပနျးနှမျးနယျခွငျး၊ ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ဖြားနာခွငျး၊ နှာရညျယိုခွငျး၊ ခြောငျးဆိုးခွငျးနှငျ့ လညျခြောငျးနာခွငျး အစရှိသော ရောဂါဝဒေနာမြား ခံစားရလရှေိ့ပါသညျ။
တရုတျသုတသေီမြားသညျ ထိုကြောကျကပျရောဂါမြားကို ကာကှယျ၊ ကုသနိုငျရနျ ရှီးပဒီးကိုအသုံးပွု၍ လူနှငျ့တိရစ်ဆာနျတို့တှငျ သိပ်ပ်ပံနညျးကစြမျးသပျလလေ့ာမှုမြား ပွုလုပျခဲ့ကွပါသညျ။ ထိုသို့လလေ့ာရာတှငျ ကြောကျကပျ၏စှမျးဆောငျရညျ ကောငျးမှနျလာစရေနျ နှငျ့ ဓာတုဆေးမြားသုံးစှဲခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာသော ကြောကျကပျပကျြစီးမှုမြားကို တားဆီးနိုငျရနျ အဓိကထားဆောငျရှကျခဲ့ကွသညျ။
ကြောကျကပျ၏လုပျဆောငျမှု သိသိသာသာ တိုးတကျကောငျးမှနျလာခွငျး၊ သှေးရညျကွညျအတှငျးမှ ခရီရတေနငျးဓာတျမြားကို ဖယျရှားနိုငျခွငျး၊ ဆီးနှငျ့ သှေးအတှငျး အညဈအကွေးပါဝငျမှု လြော့နညျးလာခွငျး၊ သှေးစီးဆငျးလညျပတျမှု ကောငျးမှနျလာခွငျးတို့ကို တှရှေိ့ရပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ တိရစ်ဆာနျနှငျ့လူမြားတှငျ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြမြားအရ ရှီးပဒီးသညျ နာတာရှညျကြောကျကပျရောဂါမြားကို ကာကှယျ၊ ကုသရာတှငျ မြားစှာအထောကျအကူပွုကွောငျး သိရှိရပါသညျ။
ရှီးပဒီး (Cordycpes) နှငျ့ သုံးစှဲနိုငျသောရောဂါမြား (၁)
အမြိုးသားမြားပုံမှနျသောကျသုံးပါက မြိုးပှားအင်ျဂါအရှယျအစား ပိုမိုကွီးထှားစရေနျ အထောကျအကူပွုခွငျး၊ သုကျလှတျစောခွငျးကို ပြောကျကငျးစခွေငျး၊ ပနျးသပေနျးညှိုးရောဂါကို သကျသာပြောကျကငျးစခွေငျး စသညျ့အကြိုးကြေးဇူးမြား ရရှိစပေါသညျ။ အမြိုးသမီးမြားတှငျ ရာသီသှေးမှနျစပွေီး မြိုးပှားအင်ျဂါခွောကျသှခွေ့ငျးမဖွဈစရေနျ ကာကှယျပေးပါသညျ။
နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါသညျမြား၊ သှေးတိုးရောဂါကွောငျ့ နှလုံးအလုပျမြားမြားလုပျနရေသူမြား၊ နှလုံးခုနျမမှနျသူမြား၊ နှလုံးကွှကျသားအားနညျးသူမြား စားသုံးပါက မြားစှာအကြိုးရှိပါသညျ။ နှလုံးကွှကျသားမြား၏ အောကျဆီဂငျြဓာတျလိုအပျခကျြကို လြော့နညျးအောငျ ပွုလုပျပေးသဖွငျ့ ရငျဘတျအောငျ့ခွငျး၊ မောပနျးခွငျးတို့ကို သကျသာစပေါသညျ။ နှလုံးသှေးကွောမပိတျစရေနျ ကာကှယျပေးပါသညျ။
အသညျးအဆီဖုံးရောဂါမြား၊ အသညျးရောငျခွငျး၊ အသညျးခွောကျခွငျးတို့ကို သကျသာပြောကျကငျးစသေညျ။ ထူခွားမှုအနနှေငျ့ အသညျးရောငျအသားဝါ ဘီပိုး၏အခှံ (HBsAg) ပြောကျကငျးစကွေောငျး သုတသေနစာတမျးတဈခုက တှရှေိ့ခကျြမှာ စိတျဝငျစားဖှယျကောငျးလှပါသညျ။ နာတာရှညျဘီပိုးရောဂါ ပြောကျကငျးအောငျကုသရာ၌ မြားစှာအစှမျးထကျသော သဘာဝဆေးစှမျးကောငျးတဈလကျဖွဈသညျ။
ရှီးပဒီး (Cordycpes) နှငျ့ သုံးစှဲနိုငျသောရောဂါမြား (၂)
ရှီးပဒီးတှငျပါဝငျသော ကျောဒီဆကျပငျ (Cordycepin) မြားကွောငျ့ ကငျဆာဆဲလျမြား ပှားမြားမှုကို ထိနျးခြုပျပေးပါသညျ။ အထူးသဖွငျ့ သှေးကငျဆာတဈမြိုးဖွဈသညျ့ လူကီးမီးယား (Leukaemia) ရောဂါကိုကုသရာ၌ မြားစှာအထောကျအကူပွုပါသညျ။ အခွားကငျဆာမြားဖွဈသညျ့လညျခြောငျးကငျဆာ၊ အဆုတျကငျဆာနှငျ့ အရပွေားကငျဆာတို့တှငျလညျး ထိရောကျမှုရှိပါသညျ။
သလိပျကိုပြျောစပွေီး ခြှဲမြားအဖွဈသို့ အလှယျတကူထှကျစရေနျ
လှုံ့ဆျောနိုငျစှမျးရှိပါသညျ။ အထူးသဖွငျ့ ပနျးနာရငျကပျြလူနာမြား၊ နာတာရှညျ အဆုတျလပွှေနျရောငျရမျးသောရောဂါမြား (Chronic bronchitis) ပုံမှနျသောကျသုံးပါက မြားစှာအကြိုးရှိပါသညျ။
ခုခံအားစနဈကို လှုံ့ဆျောပေးနိုငျသောအာနိသငျရှိပွီး အငျတာဖရှနျ (Interferon) ထှကျရှိအောငျဆောငျရှကျပေးသညျ။ သှေးဖွူဥမြား၏ ဘတျတီးရီးယားကို တိုကျခိုကျဖကျြဆီးနိုငျမှုကို တိုးတကျမွငျ့မားစသေညျ။ ထို့ကွောငျ့ ခုခံအားကဆြငျးနသေူမြား၊ မကွာခဏဖြားနာလရှေိ့သူမြားအတှကျ အထူးသငျ့လြျောပါသညျ။
ရှီးပဒီးသညျ သှေးတှငျးရှိ ဂလူးကို့ဈကို ကဆြငျးစသေဖွငျ့ ဆီးခြိုသှေးခြိုရောဂါသညျမြားသောကျသုံးပါက မြားစှာအကြိုးရှိပါသညျ။ ယငျး၏လုပျငနျးဆောငျရှကျမှုမှာ မကျဖျောမငျ (Metformin) ဆေးနှငျ့အာနိသငျတူသဖွငျ့ ကြောကျကပျမကောငျးသညျ့သူမြားတှငျ မကျဖျောမငျအစား သောကျသုံးနိုငျပါသညျ။
ရှီးပဒီးသညျ ခှနျအားကိုဖွဈစသေဖွငျ့ အသကျကွီးသူမြား၊ နာလနျထစလူမမာမြားအတှကျ အထူးသငျ့လြျောသညျ။ အားကစားသမားမြား စားသုံးပါက အမောခံနိုငျပွီး သကျလုံကောငျးစသေောကွောငျ့ စံခြိနျမြားတကျစရေနျ အထောကျအကူပွုပါသညျ။
သှေးတှငျးကိုလကျစထရော မြားနသေူမြား၊ မကောငျးသောအဆီဓာတျ (LDL) မြားနသေူမြားသုံးပါက ထိရောကျစှာ ကဆြငျးစသေညျ့အပွငျ ကောငျးသောအဆီဓာတျဖွဈသညျ့ HDL မြား တဈခဏခငျြးမွငျ့တကျလာသညျကို တှရေ့ပါသညျ။
Credit: ဒေါကျတာ ခငျမောငျလှငျ (FAME Pharmaceuticals)
ရှီးပဒီးသည် အပင်နှင့် သတ္တဝါ (၂) မျိုးပေါင်းစပ်ထားသောသဘာဝဆေးဖက်ဝင် ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ Cordycpes ဟု သိပ္ပံနည်းကျ ခေါ်ကြပြီး အင်္ဂလိပ်အမည်မှာ Caterpillar fungus ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်ရှိ ဒေသအလိုက် ခေါ်ဆိုသောအမည်များမှာ ရှီးပဒီး၊ ပိုးဆေးနွယ်ရှင်၊ ဆောင်းပိုး‌နွေမြက် တို့ဖြစ်သည်။
ရှီးပဒီးသည် ပေတစ်သောင်းကျော်ရှိသည့် ရေခဲတောင်များ၌သာ ရှင်သန်ပေါက်ပွားနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ယင်းတို့ အများဆုံးရှင်သန်သည့်ဒေသမှာ တိဘက်ကုန်းမြင့်ဒေသနှင့် ဟိမဝန္တာ ရေခဲတောင်တန်းဒေသများဖြစ်သည်။ ယင်းဒေသများမှာ တိဘက်၊ နီပေါနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ ဘူတန်နိုင်ငံ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အနောက်တောင်ဒေသနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ် ရေခဲတောင်ဒေသတို့တွင်သာ တွေ့ရပါသည်။ ကျန်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် ရေခဲတောင်များရှိသော်လည်း ရှီးပဒီးကို မတွေ့ရပါ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပူတာအိုမြို့၏ မြောက်ဘက် ရေခဲတောင်ရှိရာအရပ်များတွင်သာ သဘာဝအလျောက် တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
ယင်းတို့ရှင်သန်ပေါက်ပွားရန် ရေခဲမှတ်အောက်အေးနေရန် လိုအပ်ခြင်း၊ အောက်ဆီဂျင်လျော့နည်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သာ နေနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် တော်ရုံနေရာတွင် မပေါက်ပွားနိုင်၍ ရှားပါးအဖိုးတန်ရခြင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကပင် ရှီးပဒီးကို တရုတ်ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးပညာ၌ အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် အစောဆုံး စာပေအထောက်အထားအနေနှင့် ၁၇၅၇ ခုနှစ် ချင်မင်းဆက် (Qing Dynasty) လက်ထက်မှသာ စတင်ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုအချိန်ကာလက ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သော Ben-Cao-Cong-Xin (New Compilation of Materia Medica) စာအုပ်တွင် ရှီးပဒီးသည် ရောဂါအများစုကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်သည့် အလွန်ရှားပါးပြီး တန်ဖိုးကြီးမြင့်သော သဘာဝဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ယင်း၏ ရှားပါးခြင်း၊ တန်ဖိုးကြီးမြင့်ခြင်းနှင့် အစွမ်းအာနိသင် ထက်မြက်ခြင်းတို့ကြောင့် ဧကရာဇ်ဘုရင်ကိုသာ ကုသပေးရန်အတွက် သီးခြားထားရှိခဲ့ကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။
ယင်းသို့ကုသရာတွင် ကျောက်ကပ်ရောဂါအမျိုးမျိုး၊ အဆုတ်ရောဂါအမျိုးမျိုး၊ နှလုံးအားနည်းခြင်း၊ အသည်းရောဂါနှင့် အဆီများသောရောဂါများအတွက် အဓိကအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထူးခြားမှုအနေနှင့် လိင်စိတ်တက်ကြွစေရန် လှုံ့ဆော်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ သားသမီးမရသူများ သန္ဓေအောင်စေရန်လည်းကောင်း အသုံးပြုရာ၌ ထိရောက်မှုရှိကြောင်း မှတ်တမ်းများအရ သိရပါသည်။ ရှေးခေတ်ကပင်ရှိခဲ့သည့် အလုံးအကျိတ် ကင်ဆာအမျိုးမျိုးကိုပါ သက်သာပျောက်ကင်းစေကြောင်းလည်း သိရပါသည်။
ရှီးပဒီးသည် ရောဂါအများစုကို သက်သာပျောက်ကင်းစေရန် ကုသရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင် ကျန်းမာရေးပုံမှန်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဖြည့်စွက်အာဟာရအဖြစ်လည်း သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ မောပန်းမှုကို ပြေပျောက်စေခြင်းနှင့် သက်လုံကောင်းစေခြင်းစသည့် ကောင်းကျိုးများစွာ ရရှိစေပါသည်။
ရှီးပဒီးကို ဖြည့်စွက်အာဟာရအဖြစ် အသုံးပြုရာတွင် ရေနွေးကြမ်းသောက်သကဲ့သို့ ရေနွေးပူပူထဲ၌ စိမ်၍သောက်ခြင်းဖြင့် ထူးခြားသော ဆေးဖက်ဝင်အာနိသင်များကို ရရှိစေပါသည်။ ရှီးပဒီး လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကို တရုတ်ပြည်၊ တိဘက်နှင့် ဘူတန်နိုင်ငံတို့တွင် အထူးဧည့်သည်များကို ကြိုဆိုသည့်အနေနှင့် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ရှီးပဒီးသည် လူစား၍ရသော မှိုတစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့် ဒေသခံများက ဟင်းလျာအဖြစ်လည်း (Culinary uses) ချက်ပြုတ်စားသောက်လေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကြက်သား၊ ဘဲသား၊ ဝက်သား၊ ပုစွန်တို့နှင့် ချက်ပြုတ်ပါက လွန်စွာအရသာရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ထူးကဲသောအရသာရှိသည့်အပြင် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုသည်ဟု ယုံကြည်ကြသဖြင့် ဈေးကြီးပေးပြီး ဝယ်ယူစားသုံးလေ့ရှိပါသည်။
တရုတ်ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေး (Traditional Chinese Medicine) စာအုပ်များတွင် ဖော်ပြချက်အရ ရှီးပဒီးသည် နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါ အမျိုးမျိုးကိုလည်း ကာကွယ်ကုသနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါများမှာ-
💥 နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း (Chronic renal failure/CRF)
💥 နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါများ (Chronic glomerulonephritis)
💥 ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုကြောင့် သွေးအတွင်းပရိုတင်းဓာတ်များ လျော့နည်းလာခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ဖောရောင်ခြင်း စသည့်လက္ခဏာများ (Nephrotic syndrome) ဖြစ်သည်။
ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဖောရောင်ခြင်း၊ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် လည်ချောင်းနာခြင်း အစရှိသော ရောဂါဝေဒနာများ ခံစားရလေ့ရှိပါသည်။
တရုတ်သုတေသီများသည် ထိုကျောက်ကပ်ရောဂါများကို ကာကွယ်၊ ကုသနိုင်ရန် ရှီးပဒီးကိုအသုံးပြု၍ လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့တွင် သိပ္ပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့လေ့လာရာတွင် ကျောက်ကပ်၏စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်လာစေရန် နှင့် ဓာတုဆေးများသုံးစွဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုများကို တားဆီးနိုင်ရန် အဓိကထားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
ကျောက်ကပ်၏လုပ်ဆောင်မှု သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်း၊ သွေးရည်ကြည်အတွင်းမှ ခရီရေတနင်းဓာတ်များကို ဖယ်ရှားနိုင်ခြင်း၊ ဆီးနှင့် သွေးအတွင်း အညစ်အကြေးပါဝင်မှု လျော့နည်းလာခြင်း၊ သွေးစီးဆင်းလည်ပတ်မှု ကောင်းမွန်လာခြင်းတို့ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် တိရစ္ဆာန်နှင့်လူများတွင် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ရှီးပဒီးသည် နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါများကို ကာကွယ်၊ ကုသရာတွင် များစွာအထောက်အကူပြုကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ရှီးပဒီး (Cordycpes) နှင့် သုံးစွဲနိုင်သောရောဂါများ (၁)
အမျိုးသားများပုံမှန်သောက်သုံးပါက မျိုးပွားအင်္ဂါအရွယ်အစား ပိုမိုကြီးထွားစေရန် အထောက်အကူပြုခြင်း၊ သုက်လွှတ်စောခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေခြင်း၊ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါကို သက်သာပျောက်ကင်းစေခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိစေပါသည်။ အမျိုးသမီးများတွင် ရာသီသွေးမှန်စေပြီး မျိုးပွားအင်္ဂါခြောက်သွေ့ခြင်းမဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ပေးပါသည်။
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါသည်များ၊ သွေးတိုးရောဂါကြောင့် နှလုံးအလုပ်များများလုပ်နေရသူများ၊ နှလုံးခုန်မမှန်သူများ၊ နှလုံးကြွက်သားအားနည်းသူများ စားသုံးပါက များစွာအကျိုးရှိပါသည်။ နှလုံးကြွက်သားများ၏ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်လိုအပ်ချက်ကို လျော့နည်းအောင် ပြုလုပ်ပေးသဖြင့် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်းတို့ကို သက်သာစေပါသည်။ နှလုံးသွေးကြောမပိတ်စေရန် ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အသည်းအဆီဖုံးရောဂါများ၊ အသည်းရောင်ခြင်း၊ အသည်းခြောက်ခြင်းတို့ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။ ထူခြားမှုအနေနှင့် အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၏အခွံ (HBsAg) ပျောက်ကင်းစေကြောင်း သုတေသနစာတမ်းတစ်ခုက တွေ့ရှိချက်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။ နာတာရှည်ဘီပိုးရောဂါ ပျောက်ကင်းအောင်ကုသရာ၌ များစွာအစွမ်းထက်သော သဘာဝဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်ဖြစ်သည်။
ရှီးပဒီး (Cordycpes) နှင့် သုံးစွဲနိုင်သောရောဂါများ (၂)
ရှီးပဒီးတွင်ပါဝင်သော ကော်ဒီဆက်ပင် (Cordycepin) များကြောင့် ကင်ဆာဆဲလ်များ ပွားများမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် သွေးကင်ဆာတစ်မျိုးဖြစ်သည့် လူကီးမီးယား (Leukaemia) ရောဂါကိုကုသရာ၌ များစွာအထောက်အကူပြုပါသည်။ အခြားကင်ဆာများဖြစ်သည့်လည်ချောင်းကင်ဆာ၊ အဆုတ်ကင်ဆာနှင့် အရေပြားကင်ဆာတို့တွင်လည်း ထိရောက်မှုရှိပါသည်။
သလိပ်ကိုပျော်စေပြီး ချွဲများအဖြစ်သို့ အလွယ်တကူထွက်စေရန်
လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ပန်းနာရင်ကျပ်လူနာများ၊ နာတာရှည် အဆုတ်လေပြွန်ရောင်ရမ်းသောရောဂါများ (Chronic bronchitis) ပုံမှန်သောက်သုံးပါက များစွာအကျိုးရှိပါသည်။
ခုခံအားစနစ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သောအာနိသင်ရှိပြီး အင်တာဖရွန် (Interferon) ထွက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ သွေးဖြူဥများ၏ ဘတ်တီးရီးယားကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်မှုကို တိုးတက်မြင့်မားစေသည်။ ထို့ကြောင့် ခုခံအားကျဆင်းနေသူများ၊ မကြာခဏဖျားနာလေ့ရှိသူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
ရှီးပဒီးသည် သွေးတွင်းရှိ ဂလူးကို့စ်ကို ကျဆင်းစေသဖြင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါသည်များသောက်သုံးပါက များစွာအကျိုးရှိပါသည်။ ယင်း၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှာ မက်ဖော်မင် (Metformin) ဆေးနှင့်အာနိသင်တူသဖြင့် ကျောက်ကပ်မကောင်းသည့်သူများတွင် မက်ဖော်မင်အစား သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
ရှီးပဒီးသည် ခွန်အားကိုဖြစ်စေသဖြင့် အသက်ကြီးသူများ၊ နာလန်ထစလူမမာများအတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။ အားကစားသမားများ စားသုံးပါက အမောခံနိုင်ပြီး သက်လုံကောင်းစေသောကြောင့် စံချိန်များတက်စေရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။
သွေးတွင်းကိုလက်စထရော များနေသူများ၊ မကောင်းသောအဆီဓာတ် (LDL) များနေသူများသုံးပါက ထိရောက်စွာ ကျဆင်းစေသည့်အပြင် ကောင်းသောအဆီဓာတ်ဖြစ်သည့် HDL များ တစ်ခဏချင်းမြင့်တက်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
Credit: ဒေါက်တာ ခင်မောင်လွင် (FAME Pharmaceuticals)
Posted by Alex Aung at 12:48 PM No comments:
Claypot Chicken Rice - Mexican Tomato Rice - ဝကျသာ...
ဘာသာပွနျစာအုပျ (၉၄) အုပ်
Redmi 10X 4G နှငျ့ ၁၀ ရကျတာခရီး
'Exit Interview' နဲ့ ကတ်တီပါလမျးခှဲဖွဈပါစေ
တရားအားထုတျသူတိုငျး မဂျဖိုလျ ရ/ မရ ?
ဆိတ်ပဲမျှစ်ဟင်းချို - ကရင်ဖက်စွပ်မှိုသုပ် - ငါးပိတ...
"Indoor Plantလေးတှေ စိုကျတော့မယျဆိုရငျ ဒီအခကျြတှသေ...
Skin Care အသုံးပွုပွီးအသားအရထေိနျးသိမျးမယျ
ပဲပြားငါးအုံး -ကြက်သားလက်ဖက်သုပ် _စီချွမ်းကြက်ခြေေ...
💖 ရေမွှေး 💖
စိတ်ထင်တိုင်း မသောက်သင့်တဲ့ 'ကြာဆေး'တွေ